ဒေါင်းဇာနည်: November 2009
တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးပုံပြော
လာမည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမည်ဟု သောကြာနေ့က နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး အသင်းကြီး၏ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ပြောဆိုလိုက်သည်။
လာမည့်နှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်မည်ဟု ထပ်မံ ပြောဆိုလိုက်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
ထိုသို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းခွင့်၊ လွတ်လပ် စွာ စည်းရုံး ဟောပြောခွင့်မရရှိသေးကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ၀ါရင့်နိုင်ငံရေး သမားကြီး သခင်ချန်ထွန်းကပြောသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်သာဆိုတယ်၊ အခုအချိန်အထိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဆိုရင် ရုံးချုပ်သာဖွင့်ခွင့်ပေး ထားတာ၊ နယ်ရုံးတွေ အပိတ်ခံထားရတာပဲ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် ယခုအချိန်ကာလကတည်းက လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးခွင့် လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်၊ ဟောပြောခွင့်၊ ဆွေးနွေးခွင့်၊ သတင်းမီဒီယာများ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့် ပြုရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအခါ စစ်အစိုးရ အနေဖြင့် ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးတချို့ကိုသာ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် နယ်လှည့် စည်းရုံးခွင့်များ ပေးအပ်ထားကြောင်း သခင်ချန်ထွန်းက ထောက်ပြဝေဖန်သည်။
ထို့အပြင် မကြာသေးမီက ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများကလည်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ အမျိုသား ရင်ကြားစေ့ရေး တို့အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် တိုက်တွန်းထားသည့် စာကို နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံ လိပ်မူပြီးပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးပြောဆိုသည်မှာ ပြီးခဲ့သည့် တပ်မတော်နေ့တွင် တကြိမ်၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း ညီလာခံတွင်တကြိမ်နှင့် ယခု ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးအသင်း နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးတွင်တကြိမ် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ပြောဆို ခြင်း ကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကိုပြုလုပ်မည်မှာ သေချာသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရရှိကြောင်း ချင်းမိုင်မြို့ အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ ဦးဝင်းမင်းကဆိုသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို ဥပဒေမထုတ်သေးဘူးဆိုတာက သူတို့ဘက်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုက သိပ်မသေချာသေးလို့၊ အား နည်းနေသေးလို့ သူတို့ပါတီမနိုင်နိုင်သေးလို့” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ထို့အပြင် ယခုကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံတကာမှ တောင်းဆိုနေသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေး ကောက်ပွဲ ဖြစ်နိုင်ရန် အလားအလာနည်းပါးကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်၊ ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များအား ဖမ်းဆီးထားခြင်းမှ ပြန်လွှတ် ပေးခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ ထို့အပြင် လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးဟောပြောခွင့်မရှိသည်ကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမျှတမှုရှိလိမ့်မည်ဟု မထင်ကြောင်း ဦးဝင်းမင်းက သုံးသပ်သည်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်ကလည်း “စစ်အစိုးရအနေနဲ့က လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို မဖြစ်မနေ ကျင်းပလိမ့်မယ်၊ သူတို့အတွက် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုဖို့ အရပ်သား ရုပ်ပြအစိုးရတခု လုပ်ပြရမယ်၊ နောက်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု ခံရဖို့ လိုမယ်” ဟု ပြောသည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို NLD အား ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်စေချင်ကြောင်း၊ သို့မှသာ ၎င်းတို့ပြုလုပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲအား နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD အပြတ်အသတ် အနိုင်ရသကဲ့သို့ ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသွားမည်ကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့် အချိန်နည်းပါးစေရန် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကို အချိန်နီးကပ်မှသာ ပြဌာန်းပေးလိမ့်မည်ဟု ထင်ကြောင်း ဦးအေးသာအောင်က ပြောသည်။
တခြားသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးသည့် တိုင်းပြည်များတွင် ရွေးကောက်ပွဲတခုကို တိုတောင်းသော အချိန်ကာလတခုသတ်မှတ် ပြဌာန်းပြီး ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ယခုမှ စတင်ပြီးပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအား ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့် စသည်များကို ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အချိန်ကာလ
အားဖြင့် အနည်းဆုံး ၁ နှစ် နှင့် ၁ နှစ်ခွဲခန့်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့မှသာလျှင် နိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ပြုသည့် သန့်ရှင်း မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲတခု ဖြစ်လာမည်ထင်ကြောင်း မြန်မာ့အရေးလေ့လာနေသူ ဦးအောင်နိုင်ဦးကလည်း သုံးသပ်သည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မေလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီများဖွဲ့စည်းခွင့်ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ခွင့် ပြုခဲ့ပြီးနောက် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများ အားလုံး အတွက် စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့် အချိန်အားဖြင့် ၁ နှစ်ကျော်ခန့်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ၃ လခန့် အလို၌ ရုပ်မြင်သံကြားမှ စည်းရုံးခွင့်များ ပေးခဲ့သည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 10:22:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသ ရေအောက် ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကို စင်္ကာပူနှင့်မြန်မာ ဆောက်မည်
မြန်မာ့ကမ်းလွန် ပင်လယ်တွင် ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ရန် မြန်မာကုမ္ပဏီ တခုနှင့် သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်ကြောင်း စင်ကာပူနိုင်ငံ ပင်လယ် ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတခုက သောကြာနေ့တွင် ကြေညာလိုက်သည်။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၇ သန်းတန် စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုသည့် စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီသည် Swiber Hoilding Limited ဟု သိရသော်လည်း မြန်မာကုမ္ပဏီ၏ အမည်ကိုမူ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားခြင်း မရှိချေ။
၁၅၀ ကီလိုမီတာ ရှည်သော ရေအောက် ပိုက်လိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်မှုများကို ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်မည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းစတင် အကောင် အထည် ဖော်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
Swiber ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင် အရာရှိ မစ္စတာ ရေမွန်ဂိုက “မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကမ်းလွန် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို စတင် ဆောင်ရွက်ရတာ ကျနော်တို့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းသလို စိတ်လည်း လှုပ်ရှားမိပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
စီမံကိန်းသည် ၆ လ ကြာမြင့်မည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ပြီးဆုံးရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်းလည်း ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တရုတ်နိုင်ငံအထိ သွယ်တန်းမည့် ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံတို့ အကျိုးမရှိဘဲ စစ်အာဏာပိုင်တို့သာ အကျိုးရှိစေမည်ဟု ထိုစီမံကိန်းကို စောင့်ကြည့်နေသည့် ပြည်ပ အခြေစိုက် Shwe Gas Movement အဖွဲ့က ပြောသည်။
“အာဆီယံနိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိတဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ရော စစ်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ရော ဒီကိစ္စကို အလေးအနက် စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ တခြားငွေရေး ကြေးရေး ဆိုင်ရာ အပိုင်းတွေမှာလည်း ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တန်ဖိုးတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့် အစား စစ်အုပ်စုကို ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု တခုအတွက် ထောက်ပံ့ နေတာက မြန်မာနိုင်ငံ အပြောင်းအလဲ အတွက် တွန်းအား မပေးသလို ဖြစ်တာပေါ့” ဟု Shwe Gas အဖွဲ့ မှ ကိုဝင်းအောင်က ဆိုသည်။
ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ခွင့် ရရှိရန် အိန္ဒိယ အပါအ၀င် တခြား တိုင်းပြည်များက ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသော်လည်း စင်္ကာပူကုမ္ပဏီက အနိုင်ရသွားကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအရ ပိုပြီး၍ အာမခံချက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ကီလိုမီတာ ၄၀၀၀ ခန့် ရှည်လျားသည့် ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို တရုတ်အမျိုးသား ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း(CNCP)က၂၀၀၉ စက်တင်ဘာလမှ စတင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ ရောင်းရငွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် လာမည့် အနှစ် ၃၀ အတွင်း နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ခန့် ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း Shwe Gas Movement အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ အရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းချခြင်းမှ ရရှိသော နှစ်စဉ် ၀င်ငွေမှာ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံခန့်ရှိပြီး နိုင်ငံဝင်ငွေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိကြောင်းလည်း Shwe Gas အဖွဲ့က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုသည် ၂၀၀၇-၀၈ တွင် ဒေါ်လာ ၁၇၂.၇၂ သန်း ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၀၈-၀၉ တွင် ဒေါ်လာ ၉၈၅ သန်း တိုးလာကြောင်း အမျိုးသား စီးပွားရေးနှင့် စီမံကိန်း ၀န်ကြီးဌာနက ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်သော စာရင်းများအရ သိရသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမှုများ ထပ်မံပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း စင်္ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ ဂိုဂျုတ်တောင်က မြန်မာပြည်သို့ အလည်အပတ် သွားရောက်ခဲ့သည့် ဇွန်လက ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ စင်ကာပူနိုင်ငံသည် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းဒဏ် ခံခဲ့ရသော မြန်မာပြည်ကို ဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ကူညီပေးခဲ့သည့် ပထမဦးဆုံးသောနိုင်ငံ ဖြစ်သကဲ့သို့ နောင်တွင်လည်းလူသား ချင်းစာနာသည့်အနေဖြင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ သန်း ကူညီပေးသွားရန် ကတိပေးထားကြောင်း သိရသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံသည် မြန်မာပြည်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံး နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် ၂ နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုမှာ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ ကျော် ရှိသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 10:20:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည် သေဆုံးရခြင်း၏ နောက်ကွယ်
လွန်ခဲ့သည့် တလကျော် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက်က ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အထူးကုဆေးခန်းတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူအပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည့် နဝမတန်းကျောင်းသူ မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည်၏ ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ Weekly Eleven သတင်း ဂျာနယ်နှင့် လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ်တို့တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည်နှင့် မိခင်ဒေါ်ချိုချိုမြင့် (ဓာတ်ပုံ - လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်)
Weekly Eleven သတင်း ဂျာနယ်တွင် အဆိုပါသတင်းကို 'ဆရာဝန်ကြီးများ လူနာအပေါ် အချိန်ပေးမှု နည်းပါးခြင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းကြီးများ၏ ဆရာဝန် ကြီးများမျက်နှာ တစ်ခုတည်း ကိုသာ ကြည့်ခြင်းကြောင့် ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ် များဖြစ်ပေါ်နေ' ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ သေဆုံးသူ၏ ဆွေမျိုး၊ မိဘနှစ်ဦး၊ လေ့လာသုံးသပ်သူများ၊ အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး၊ စာနယ်ဇင်းသမားတဦး၏ ပြောဆိုချက်များနှင့် ပါမောက္ခ သမားတော်ကြီး ဦးလှမြင့်၏ “ဆေးပညာ လောကသားများသို့ ပန်ကြားချက်” စာအုပ်ကို ကိုးကား ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် Eleven Media Group မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက “ချမ်းသာပြီး ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ အထူးကု ဆေးခန်းသွားနိုင်၊ ပြောနိုင်တဲ့သူမို့ ဒီလိုသိကြရတာပါ။ ဆင်းရဲပြီး ပြောပြနိုင်စွမ်း မရှိတဲ့လူတွေ ဘယ်လောက် ခံစားထားကြရပြီလဲ။ လူထုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေနည်းတူ သုံးစွဲ နိုင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးမှာ သုံးစွဲမှုတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ငွေယိုပေါက်ကို ပိတ်စေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို သိထားရင် ကောင်းပါတယ်။ လူထု ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ဖို့ လိုလာပါပြီ” ဟု သုံးသပ်ထားသည်။
လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ်တွင်လည်း “ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပုဂ္ဂလိက အထူးကု ဆေးခန်းမှ မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး၏ ကြေကွဲရင်နင့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်နှင့် မိသားစု ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝန်း၏ မှတ်ချက်များကို ကိုးကား ရေးသားထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
“ခွဲစိတ်ပြီး သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်အခန်း မရသေးခင်၊ ပိုးသတ်ခန်းမှာ ညနေ ၃ နာရီထိနေရတယ်။ အဲဒီ အချိန် ဆေးရုံရဲ့ အခန်းနံရံကို လျှပ်စစ်မော်တာနဲ့အပေါက်ဖောက်တယ်။ တူတွေနဲ့ထုတယ်။ အသံတွေက ဆူညံနေတာပဲ။ ဒါကတော့ ဆေးခန်းရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ညံ့ဖျင်းတဲ့အကြောင်းပါ။ ကျမတို့ပြောတာ ပြောလို့မရဘူး။ ကျမအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်မှ ဝရိန်မဆော်တော့ဘဲ ရပ်သွားတယ်” ဟု မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည်၏ မိခင်က ပြောသည်ကို လျှပ်တစ်ပြက်တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါဂျာနယ်တွင်ပင် “အထက်ပါ ကြေကွဲရင်နင့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်မျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလူနာများဤကဲ့သို့ အဖြစ်ဆိုးနှင့် ထပ်မံမကြုံတွေ့စေရန် အထူးကုဆေးခန်းရှိ ဆရာဝန်များ အတွေ့အကြုံ ရှိသော်လည်း ဆေးပညာကို အဆက်မပြက်လေ့လာပြီး သတိရှိရှိနှင့်စေတနာထားကာ လူနာများအား ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကုသပေးသင့်ကြောင်း အပြုသဘောဆောင်၍ ကာယကံရှင် ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝန်းက လျှပ်တစ်ပြက်သို့ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်” ဟု ရေးသားထားသည်။
ထိုသတင်းပေးပို့ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တက္ကသိုလ်လှမော်ဆိုသူက “မြန်မာသတင်းမီဒီယာ တချို့ စည်းဘောင်လွတ် နေခြင်း” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တရားဥပဒေရှုထောင့်၊ ဆေးပညာရှုထောင့်တို့မှ ကြည့်ကာ “မြန်မာ့ လူထု ကျန်းမာရေး” ဆိုသည့် http://health.ngoinmyanmar.orgဘလော့ စာမျက်နှာတွင် တန်ပြန်ရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထိုဘလော့စာမျက်နှာတွင် ရေးသားနေသူများမှာ မြန်မာလူထု ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တက္ကသိုလ်လှမော်၏ ဆောင်းပါး၌ “သတင်းနှစ်ပုဒ်လုံး၏ သုံးသပ်ချက်မှာ ဆရာဝန်၏ အမှားကြောင့် အမျိုးသမီးငယ် အသက်ဆုံးရှုံးရသည်ဟု ဆိုထားပြီး နောင်တွင် အလားတူ အမှားမျိုးမဖြစ်ရန် အကြံဉာဏ် ပေးထားလေသည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
“သတင်းနှစ်ပုဒ်လုံး၏ အရင်းအမြစ်သည် ကွယ်လွန်သွားသော အမျိုးသမီးငယ်၏ မိခင်ထံမှ ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော ဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) ၎င်းတို့က လွှဲအပ်သော ရှေ့နေတို့၏ တိုက်ရိုက် ပြောဆိုချက်များ မပါဝင်။ (မိခင်က တဆင့်ပြောသော ဆေးရုံ၏ အစုရှယ်ယာ ပါဝင်သူတဦး၏ ပြောဆိုချက်သည် hearsay evidence ဖြစ်သဖြင့် သက်သေအဖြစ် တင်ရန် ခဲယဉ်းသည်) ထို့ကြောင့် မျှတမှု ရှိသော သတင်းများ မဟုတ်ပေ” ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုထားသည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းဂျာနယ်တစောင်၏ အယ်ဒီတာတဦးကမူ သတင်းဂျာနယ်တစောင်၏ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဝင်ရောက် သုံးသပ်ထားသည်မှအပ Weekly Elevenပါ သတင်းသည် စည်းဘောင်လွတ်သည်ဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်၏ အခြေအနေအရ ယခုကဲ့သို့သော သတင်းသည် လိုက်ရခက်ခဲသော သတင်းတပုဒ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်ကို ပြည်သူသိရှိရန်အတွက် ဖော်ပြသင့်ကြောင်း ပြောသည်။
“မိသားစုက ခံစားချက်နဲ့ ပြောသွားတယ်ဆိုတာ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် တဘက်က အသံကို ရဖို့ကျတော့ အထူးကု ဆေးခန်းဘက်ကို မေးလို့မရဘူး။ အဲဒီဆေးရုံဆေးခန်း အမည်ကိုလည်း ထည့်ရေးလို့မရဘူး။ ရေးရင်စိစစ်ရေးက ဖြုတ်မှာ။ စိစစ်ရေးက မဖြုတ်တောင် အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရလို့ ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး သတင်းသမားတွေ အနေနဲ့ မကြိုးစားဘဲတော့ နေမှာမဟုတ်ဘူး။ ရသလောက်တော့ ကြိုးစားမှာပဲ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းက မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည် ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့သော ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ရွှေဂုံတိုင်အထူးကု ဆေးခန်းသို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူများ မအားလပ်ကြောင်းသာ ပြန်ကြားခဲ့သည်။ မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည်ကို ခွဲစိတ်ခဲ့သော ဆရာဝန်ကြီးမှာမူ တရုတ်ပြည်သို့ ခရီးသွားနေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာပြည်တွင် အစိုးရဆေးရုံကြီးများ၌ “စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေး” ဆိုသည် စနစ်ကို ကျင့်သုံးလျက်ရှိရာ လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးမှန်သမျှ လူနာက ငွေကုန်ကြေးကျခံရပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အပိုင်းတွင် စိုးရိမ်ရသည့် အနေအထား ဖြစ်နေကြောင်း လေ့လာသူတို့က သုံးသပ်ကြသည်။
အစိုးရဆေးရုံကြီးများ၌ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားနည်းသောကြောင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးခန်းကြီးများတွင် ငွေကုန် ကြေးကျခံကာ တက်ရောက်ကုသသော်လည်း ထိရောက်သော စောင့်ရှောက်မှု မရရှိဘဲ အများစုမှာ ဝန်ဆောင်မှု ညံ့ဖျင်းလှကြောင်း ဝေဖန်နေကြ သည်။
ယခုလက်ရှိတွင် “စားသုံးသူ အခွင့်အရေး” နှင့်ပတ်သက်၍ ပညာပေး ပိုစတာများ၊ ကာတွန်းများ ရေးဆွဲနေသော ကာတွန်း အော်ပီကျယ်က မြန်မာပြည်တွင် စားသုံးသူနှင့် ပတ်သက်၍ ကာကွယ်ပေးသည့် ဥပဒေ မရှိသော်လည်း မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည်၏ ဖြစ်ရပ်မျိုး နောင်မဖြစ်ရန် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ဖော်ထုတ်သင့်သည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းက မကြာသေးမီက ဆရာဝန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးဆွဲပေးထားသော “စားသုံးသူ အခွင့်အရေး” ပညာပေး ပိုစတာအကြောင်းကို ပြောပြီး ဆရာဝန်နှင့်လူနာ အင်အားမမျှခြင်း၊ အချိန်မပေးနိုင်ဘဲ ရုပ်ပြသဘော ဆိုင်းဘုတ်တပ်ခြင်း၊ ဆေးကုသပုံ မှားယွင်းခြင်း၊ ဆေးဝါးမှားယွင်းခြင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုခြင်းတို့ကြောင့် လူနာများ အသက်ဆုံးရှုံးရသည့် အဖြစ်အပျက်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာ မကဘဲ ကမ္ဘာမှာပါ ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ဆိုသည်။
“ဒီဆရာဝန်ကြီး တယောက်တည်းကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြောင့် နောက်မှ နောင်တရတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါတယ်” ဟု ကာတွန်းအော်ပီကျယ်က ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့နေ ခန္ဓာဗေဒ ဆရာဝန်ကြီးတဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာတင်မောင်ကြည်က ခွဲစိတ်ကုသမှုတခုတွင် အုပ်ထိန်းသူ၊ သက်ဆိုင်သူ တဦးဦး၏ ခွင့်ပြုချက်မပါရှိဘဲ ပြုလုပ်၍ မရသဖြင့် ယခုဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်စရာ မရှိကြောင်း ရှင်းပြသည်။
“တကယ်တော့ ဒီလို အဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေ မကြုံရအောင် လိုအပ်တဲ့ ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးမယ် ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ” ဟု သူက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာက သတင်းသမားများ အနေနှင့် ခံစားချက်နောက်ကို လိုက်၍ ရေးသားခြင်းမှအပ မှန်ကန်သော အချက်အလက်များနှင့် ပြည်သူသိသင့်သော သတင်းများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရေးသားဖော်ပြလျှင် အာဏာပိုင်တို့ ကလည်း ခွင့်ပြုပေးသင့်ကြောင်း သုံးသပ်သည်။
မခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည် သေဆုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ မိခင်က ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးအား တရားမစွဲလိုကြောင်း၊ ဆရာဝန် အနေနှင့် အသိစိတ်ဓာတ်ရှိစွာ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံစေချင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ယခင်အပတ်ထုတ် မော်ဒန်သတင်းဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 10:18:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 10:13:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 10:11:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲများကို မြန်မာပရိတ်သတ်များအနေဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်
လာအိုနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ၂၅ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲများကို မြန်မာပရိတ်သတ်များအနေဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗီယန်ကျင်းမြို့တော်၌ လာမည့်လ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြတော့မည့် ဆီးဂိမ်း SEA Game ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘောလုံးနှင့် အခြားအားကစားများဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာ့ အသံ၊ မြဝတီအသံလွှင့်ဌာနနှင့် MRTV4တို့မှ ပြသနိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ဆီးဂိမ်းပွဲက လွှင့်ဖို့ မရှိဘူး။ ဒီမှာက ESPN နဲ့ Star Sport လိုင်းကို တိုက်ရိုက် ယူထားတာ။ သူတို့ရဲ့ လွှင့်မယ့် ဂိုက် Guide ထဲမှာကို မပါတာ” ဟု ပြည်ပအားကစားပွဲများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပြသနေ သည့် MRTV4မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး အားကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်သည့် SEA Game ပြိုင်ပွဲကို ၂ နှစ်တကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက SEA Game မှ ဘောလုံးအပါအဝင် အခြားအားကစားပြိုင်ပွဲ အစီအစဉ်များကို တိုက်ရိုတ်ပြသမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ နိုင်သည့်ပွဲများကို ပြိုင်ပွဲများအပြီးမှသာ ပြန်လည် ပြသနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း ပြောသည်။
“လွှင့်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ကို ခုချိန်ထိ ဘာမှတော့ မညွန်ကြားသေးဘူး။ Live တော့ လွှင့်စရာ မရှိဘူး” ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ယင်းအရာရှိကြီးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာဘောလုံအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်၊ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးစိုးမိုးတို့အပါအဝင် နည်းပြများနှင့် အားကစားသမားများသည် မနက်ဖြန်ညနေတွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှတဆင့် လာအိုနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာမည် ဖြစ်သည်။ မထွက်ခွာမီ လေဆိပ်၌ သတင်းစာရှင်းပွဲ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာအသင်းမှာ အုပ်စု (B) တွင် အိမ်ရှင်လာအို၊ အင်းဒိုနီးရှား၊ စင်္ကာပူ တို့နှင့် တအုပ်စုထဲကျပြီး ဒီဇင် ဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် အိမ်ရှင်လာအို အသင်း၊ ၇ ရက်နေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှားအသင်း၊ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် နာမည်ကြီး စင်္ကာပူအသင်းတို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
အုပ်စု (A) တွင် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ၌ (၈) ကြိမ် ဗိုလ်စွဲထားသော ထိုင်းအသင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ အရှေ့တီမော အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
SEA Game တွင် ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းမှာ မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအို တို့နှင့် ပတ်လည်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရမှတ်အများဆုံး နှစ်သင်း ဗိုလ်လုရမည် ဖြစ်သည်။
လာအိုနိုင်ငံသို့ ဘောလုံးအသင်း ၂ သင်း၊ MNL ကလပ်အသင်းပိုင်ရှင်များ၊ နာမည်ကြီးဘောလုံးသမား ဟောင်းများအပါအဝင် လူ ၉ဝ ခန့်ကို ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အစီအစဉ်ဖြင့် လေယာဉ်စင်းလုံးဌား ခေါ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးစိုးမိုးက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် SEA Game တွင် ဘောလုံး၊ လက်ဝှေ့၊ ရေကူး၊ ဘော်လီဘော အပါအဝင် ၁၇ မျိုး ၌ ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာအဖွဲ့နှင့်အတူ MRTV4အဖွဲ့လည်း ပါသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း တိုက်ရိုက် လွှင့်ထုတ်မည့် အစီအစဉ် မသေချာကြောင်း သူကပြောသည်။
ယခင်နှစ် SEA Game တွင် မြန်မာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်သည့် ဘောလုံးပွဲများကို တိုက်ရိုက်ပြသမှု ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းပွဲတွင် မြန်မာက ဒုတိယရပြီး ထိုင်းအသင်းက ဗိုလ်စွဲသွားခဲ့သည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 10:10:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 4:13:00 AM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဆန်သစ်ပေါ်ချိန်ကာလတွင် ဆန်ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းလေ့ရှိသော်လည်း ယခုနှစ် ဆန်သစ်ဝင်ချိန်တွင် ဆန်ကောင်း၊ ဆန်ချောများသာ ဈေးနှုန်းကျဆင်း၍ ဆန်ကြမ်းများမှာမူ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လူလတ်တန်းစားနှင့် အခြေခံလူတန်းစားများ အများဆုံး စားသုံးသော ဆန်ကြမ်းများ ဈေးနှုန်းမြင့်မားနေရခြင်းမှာ ယခုနှစ် ပြည်ပဆန်တင်ပို့မှု ပမာဏလျာထားချက် မြင့်မားခြင်းနှင့် ပို့ကုန်ဝယ်လက်ကို မျှော်လင့်၍ ကြိုတင်သိုလှောင်မှု စတင်ပြုလုပ်နေကြခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရခြင်း ဖြစ်သည်။
''ဆန်ကြမ်းက အဝင်နည်းတယ်။ ဒီနှစ် တန်ချိန်တသန်းခွဲ လျာထားတော့ တလပိုင်း၊ နှစ်လပိုင်းလောက် အိတ်စပို့ ပြန်ဆွဲမယ့် အချိန်ကို မျှော်နေကြတယ်။ နယ်ကုန်သည်တွေ လှောင်တာကော ကုမ္ပဏီတွေက တိုက်ရိုက် ဆင်းဝယ်ထားတာတွေနဲ့ရော ဆန်ကြမ်းအသစ်က ကုန်တက်ကို နည်းနေတာ'' ဟု ရန်ကုန်မြို့ ကိုင်းတန်းလမ်းရှိ ဆန်စပါးကုန်စည်ဒိုင်မှ ကုန်သည်တဦးက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆန်တင်ပို့ရာတွင် ပြည်ပဈေးကွက်အကြိုက် အရိုးရှည်ဆန်များကိုသာ တင်ပို့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းဆန်များမှာ အခြေခံလူတန်းစားများ အဓိကစားသုံးသော ဧည့်မထ၊ မနောသုခ၊ ဆင်းသွယ်လတ် စသည့် ဆန်ကြမ်းအုပ်စုဝင် ဆန်များဖြစ်သည်။ (ဆန်ကျိုးကြေမှု ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ၂၅ မှတ်တန် ဆန်ဖြူဟု ခေါ်ဆိုသည်။)
ဆန်သစ် (အချော) များ အများအပြား ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် လက်ကျန်ဆန်ဟောင်း (အချော) များ ဈေးနှုန်းကျဆင်းနေသော်လည်း ကုန်တက်နည်းသည့် ဆန်သစ် (အကြမ်း) နှင့် ဆန်ဟောင်း (အကြမ်း) တို့အကြား ဈေးကွာခြားချက်နည်းပါးကြောင်း သိရသည်။
ဆန်ဟောင်း (အကြမ်း) များမှာ တတင်းခွဲဝင် တအိတ်လျှင် ကျပ် ၁၇၅ဝဝ ခန့် ဈေးရှိနေပြီး ယင်းဈေးနှုန်းမှာ အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းက ရှိနေခဲ့သော ဈေးနှုန်းအတိုင်း မပြောင်းမလဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဆန်သစ် (အကြမ်း) ဈေးနှုန်းများမှာ ဒေးဒရဲ၊ မော်ကျွန်း၊ ဝါးခယ်မ၊ ကော့မှူး စသော ထွက်ရှိရာဒေသမှ အရည်အသွေးကိုလိုက်၍ ဈေးအနည်းငယ် ကွာခြားမှုရှိနေပြီး တအိတ်လျှင် ကျပ် ၁၄ဝဝဝ မှ ၁၅ဝဝဝ အကြား ရှိနေသည်။
ဆန်သစ်ပေါ်စ အောက်တိုဘာလကုန်ခန့်က တအိတ်လျှင် ၂၆၅ဝဝ ကျပ်ဝန်းကျင် ပုံမှန်ရှိနေခဲ့သော ဖျာပုံ၊ မြောင်းမြ ပေါ်ဆန်းမွှေး (ထိပ်စရှယ်) ဆန်ဟောင်းများမှာ ယမန်နေ့တွင် ကျပ် ၂၃ဝဝဝ မှ ၂၄ဝဝဝ အကြားတွင်သာ ရှိတော့ပြီး ဆန်သစ် (အချော) ပေါ်ဆန်းမွှေးမှာ ကျပ် ၁၉ဝဝဝ မှ ၂ဝဝဝဝ ဝန်းကျင်တွင်သာ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
“ဆန်သစ်ပေါ်စမှာ ဆန်က အစိုဓာတ် ရှိနေတယ်။ အထားမခံဘူးဆိုတော့ ဆန်ဟောင်းထက် ဈေးနိမ့်တာ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် အကြမ်းဈေးက တင်းခံနေတော့ အချောနဲ့ အကြမ်းက ဈေးကပ်သွားတယ်။ အိတ်စပို့ကလည်း လျာထားချက်ပြည့်အောင် ဆက်ဆွဲဦးမယ့် အနေအထားရှိနေတော့ ဆန်ကြမ်းဈေးက ကျလာစရာ မမြင်ဘူး။ ဆန်ချောကတော့ ဒီနှစ် ဈေးလျော့မယ့် အနေအထားရှိတယ်။ ဆန်ကြမ်းဈေးတော့ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ အိတ်စပို့ဆွဲတဲ့အချိန် ဈေးမြင့်ဦးမယ့် အနေအထားရှိတယ်” ဟု ဘုရင့်နောင် ဆန်ပွဲရုံတခုက ဆိုသည်။
ယမန်နှစ်က နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရပြီး၊ စပါးပေါ်ချိန် စပါးဈေးကျဆင်းသည့် ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရသည့် ဧရာဝတီတိုင်းမှ လယ်သမားများအဖို့ အနည်းငယ် သက်သာရာရမည့် နှစ်တနှစ်ဖြစ်ကြောင်း နယ်ကုန်သည်များက ဆိုသည်။
''လောလောဆယ် စပါးသစ် အချွန်ဈေး (အကြမ်း) က ၄ သိန်းနီးပါးမှာ ရှိတယ်။ အချွန် (အဟောင်း) က ၄ သိန်းခွဲကျော်ကျော် ရှိနေသေးတယ်။ အချောတွေကတော့ စပါးသစ်က ၄ သိန်းခွဲနဲ့ ၅ သိန်းကြား၊ စပါးဟောင်းက ၆ သိန်းကျော်လောက်အထိ ပေါက်ဈေးရှိတယ်။ လယ်သမားတွေတော့ ဒီနှစ် အသက်ရှူချောင်မယ့် အနေအထား ရှိပါတယ်။ တချို့လယ်သမားတွေကလည်း စပါးရိတ်ပြီး စက်ထဲ တန်းမပို့တာရှိတယ်။ ဈေးများ ပိုကောင်းလာမလားလို့ ချိန်နေကြတာပေါ့'' ဟု ဒေးဒရဲမြို့နယ်မှ ဆန်ကုန်သည်တဦးက ဆိုသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသအများစုတွင်လည်း ယခုနှစ် စပါးအထွက်နှုန်း ကောင်းမွန်ကြောင်း အများအားဖြင့် တဧက တင်း ၄ဝ မှ ၇ဝ အကြား ထွက်နှုန်းရှိကြောင်း ဒေးဒရဲဆန်ကုန်သည်က ဆိုသည်။
လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ဆန်ဈေးနှုန်းမှာလည်း မြင့်တက်လျက် ရှိနေသည်။ နိုဝင်ဘာလလယ်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် ယခုနှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးစံချိန်အဖြစ် ၂၅ မှတ် ဆန်ဖြူတတန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၇ဝ ဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် စပါးအထွက်နှုန်းလျော့ခဲ့ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုဂယက် ရိုက်ခတ်ခြင်းများ ခံခဲ့ရသော်လည်း ပြည်ပသို့ ဆန်စပါး ပိုမိုတင်ပို့မှုတွင် ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထက် နှစ်ဆနီးပါးမျှ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြည်ပသို့ ဆန်တန်ချိန် ၆ သိန်း ၇ သောင်းခန့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၅.၃၁ သန်း ရှိခဲ့ကာ၊ ဆန်တတန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈ဝ နီးပါး ပျမ်းမျှ ရရှိခဲ့သည်။
ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ တွင် ပြည်ပသို့ ဆန်တန်ချိန်တသန်း တင်ပို့ရန် မူလက လျာထားသတ်မှတ်ခဲ့ရာ ဧပြီလမှ သြဂုတ်လကုန်အထိ ၅ လတာ ကာလအတွင်း ဆန်တန်ချိန် ၄ သိန်းကျော် (တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၆ သန်းကျော်) တင်ပို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဆန်တန်ချိန် တသန်းခွဲအထိ ပြောင်းလဲလျာထားခဲ့သည်။
လျာထားချက် ပြည့်မီရေးအတွက် အစိုးရက ဆန်တင်ပို့မှု မူဝါဒကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ယခင်က သတ်မှတ်ထားသော ဆန်ပမာဏ လက်ဝယ်ရှိမှသာ တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးရာမှ နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းကန့်သတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဆန်ဈေးနှုန်း မြင့်မားနေခြင်း၊ တင်ပို့မှုလွယ်ကူခြင်းတို့ကြောင့် လာမည့် ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သော ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တတိယ ၄ လပတ်တွင် လျာထားချက်ပြည့်မီအောင် တင်ပို့နိုင်မည်ဟု ယူဆကြောင်း ဆန်တင်ပို့နေသည့် ကုမ္ပဏီတခုက ပြောသည်။
''မြန်မာ့ဆန်ဈေးကတော့ ထိုင်းတို့၊ ဗီယက်နမ်တို့နဲ့ ကွာပါတယ်။ အခုလက်ရှိ တတန်ကို ဒေါ်လာ ၃၄ဝ ဝန်းကျင်လောက် ရနေတယ်။ လာမယ့် နှစ်ဆန်းပိုင်း ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်ရင်တော့ ဒီထက် ပိုပို့နိုင်မှာပါ။ လောလောဆယ် မနှစ်က ပမာဏနီးပါး ရှိသွားပြီလို့ ကြားတယ်။ လျာထားချက်တော့ ပြည့်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်'' ဟု ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့နေသည့် ယင်းကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကို အာဏာပိုင်များက ပြုပြင်ခွင့် ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သူမ၏ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ မြို့တော်စည်ပင်က နေအိမ် အပေါ်ထပ်ရှိ ဝရံတာတွင် အုတ်စီ အခန်းဖွဲ့၊ ပြင်ဆင်ခွင့် ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အိမ်ပြင်ခွင့်ရတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်ကတည်း ကပါ။ အခုလို အကျယ်ချုပ်ကာလမှာ လက်သမားတွေ သွင်းရေး၊ အလုပ်သမားတွေ သွင်းရေး၊ ပစ္စည်းသွင်းရေး ကိစ္စတွေကို အင်ဂျင်နီယာ၊ ဒေါ်စုနဲ့ ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့တွေ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
“ ဒီအပတ်ထဲမှာပဲ ဒီလုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ပေးမယ့် ဒေါ်စုနဲ့ သူ့မ်ိတ်ဆွေတယောက် (အင်ဂျင်နီယာ) ရယ်၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ ဒေါ်စုအိမ်မှာ ထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်” ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။
နေအိမ် ပြုပြင်ရေးကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အပြီးသတ် ပြုပြင်ရန် အာဏာပိုင်များက သတ်မှတ်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
နေအိမ် ပြုပြင်ခွင့် ပေးလိုက်ခြင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံဝင်းအတွင်း သွားလာခွင့် တင်းကြပ်မှုများ လျော့ပေးခြင်းမျိုး မယူဆကြောင်း သူက ပြောသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ် ခေါင်မိုး အုတ်ကြွတ်ပြားများ ကျိုးပဲ့ ပျက်စီးခဲ့သည်ကို အာဏာပိုင်များက ပြုပြင်ခွင့် ပေးခဲ့သည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 1:21:00 AM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တွင် ဒီဇယ်ဈေး မြင့်တက်
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ စက်သုံးဆီ ဒီဇယ်ဆီဈေးကွက်မှာ ၅ ရက်အတွင်း သိသာစွာ ထိုးတက်သွားကြောင်း ဒီဇယ်အရောင်း ကုမ္ပဏီတချို့က ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၅ ရက်ခန့်က ဒီဇယ် ၅၀ ဂါလံဝင် တပေပါကို ကျပ် ၁ သိန်း ၃ သောင်း ဈေးရှိရာမှ ယနေ့ပေါက်ဈေး ကျပ် ၁ သိန်း ၅ သောင်းခန့်အထိ ကျဆင်းသွားကြောင်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဘုရင့်နောင်ဈေးရှိ ဒီဇယ်အရောင်း ကုမ္ပဏီ တချို့က ဆိုသည်။
“လက်လီဈေး တဂါလံက ၃ဝဝဝ (ကျပ်) ဈေးရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ ရက်က ၂၆ဝဝ ပါ။ ဘာကြောင့် တက်တယ်ဆိုတာ မသိဘူး” ဟု ဘုရင့်နောင် ဒီဇယ်အရောင်း ကုမ္ပဏီတခုက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့ရှိ ကားအင်ဂျင်ပြင်သည့် ဝင်းမြဆိုင်တွင် ကားအင်ဂျင်ပြုပြင်ရန် ယမန်နေ့က ဒီဇယ်ဆီ တပေပါကို ကျပ် ၁ သိန်း ၅ သောင်း ၂ ထောင် ဈေးနှုန်းပေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ဘုရင့်နောင်ဈေးက အလင်းရောင်ဆီဆိုင် တာဝန်ရှိသူ တဦးကမူ “ကုမ္ပဏီက ဈေးတက်လိုက်တာပါ။ ကျမတို့က တဆင့်ရောင်းဆိုတော့ သူတို့ဈေးတင်ရင် ကျမတို့ကလည်း ဈေးနည်းနည်း တင်ရတာမျိုးတော့ ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
၎င်းဆိုင်တွင် ဒီဇယ်ဆီ တဂါလံကို လက်လီဈေး ကျပ် ၃ဝဝဝ ရှိသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း အင်ဂျင်ဝိုင်ဈေးနှုန်းမှာ လက်လီရောင်းဈေး ယခင် ကျပ် ၅၅၀၀ ဈေးနှုန်းရှိရာမှ ယနေ့ပေါက်ဈေး ကျပ် ၅ဝဝဝ အထိ ကျဆင်းသွားသည်။ ။
ယခုလို အပြင် ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ထိုးတက်သွားသော်လည်း အစိုးရဈေးနှုန်းမှာ ယခင်အတိုင်း တဂါလံလျှင် ကျပ် ၃ဝဝဝ နှင့် FEC ၂ ဒဿမ ၉ ဒေါ်လာသို့ သတ်မှတ်ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း အလုံမြို့နယ်ရှိ အစိုးရ ဒီဇယ်အရောင်းဆိုင်က တာဝန်ရှိသူတဦးက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 1:20:00 AM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မြက်ခင်းတု ဘောလုံးကွင်း မြန်မာပြည်နှင့် မကိုက်
မြက်ခင်းတု ဘောလုံးကွင်း အသုံးပြုခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသလို နိုင်ငံတကာပွဲများအတွက်လည်း အသုံးပြု၍ မရကြောင်း ဝါရင့်အားကစားကလောင်ရှင် ဦးခင်မောင်ထွေးက ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြက်အစစ် မပေါက်သည့်ဒေသ၊ မိုးခေါင်ဒေသနှင့် နှင်းထူထပ်သည့် ဒေသများတွင်သာ အသုံးပြုလေ့ရှိကြောင်း မြန်မာ ရာသီဥတုနှင့်မူ ကိုက်ညီခြင်း မရှိကြောင်း ဝါရင့်အားကစားကလောင်ရှင် ဦးခင်မောင်ထွေးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သူ ထိပ်သီးစီပွားလုပ်ငန်းရှင် ဦးတေဇ ပိုင်ဆိုင်သော Yangon United FC ဘောလုံးအသင်းအတွက် ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လှိုင်အားကစားကွင်းအား မြက်ခင်းတုကွင်းအဖြစ် ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ဆီက ရာသီဥတုနဲ့က မအပ်စပ်ဘူးဗျ။ မိုးခေါင်တဲ့ နေရာ၊ မြက်မပေါက်တဲ့ နေရာတွေမှာ မြက်အတုနဲ့ ကစားကြတာကိုး။ ဒီမှာက မိုးက ဖြိုင်ဖြိုင် ရွာတယ်။ မိုးတွေရွာရင် ကာရမယ်၊ သိမ်းရမယ်။ နိုင်ငံတကာပွဲတွေ အတွက်ဆိုလည်း ဖီဖာက သုံးခွင့်ပြုမထားဘူး” ဟု ဦးခင်မောင်ထွေးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြက်ခင်းတုကွင်း ဆိုသည်မှာ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် မြက်အစစ်ပမာ တုပပြုလုပ်ထားသည့် အပင်ငယ်များပါသော ကော်ဇောအလွှာများကို ညီညာစွာပြုပြင်ထားသည့် ဘောလုံးကွင်းမြေပေါ်တွင် တခုချင်းဆက်စပ် ဖြန့်ခင်းထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၄ ထောင်ကျော် (ပွဲကြည့်စင်ပြင်ဆင်ခမပါ) ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး ၆ လကျော်ကြာမြင့်မည့် ယင်းစီမံကိန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ပြီးခဲ့သည့် ၃ လခန့်က ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အသင်းမန်နေဂျာက ပြောသည်။
“လောလောဆယ် ကွင်းပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ ခြုံတွေကို စက်ယန္တယားတွေနဲ့ထိုးပြီး မြေညှိနေတဲ့အပိုင်း လုပ်နေတယ်။ မြက်ခင်းတု ခင်းဖို့ အတွက်ကျတော့ ပညာရှင်တွေက လုပ်နေကြတယ်” ဟု အသင်း မန်နေဂျာ ဦးကျော်စိုးလွင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်-MFF က မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်-MNL Club အသင်း ၈ သင်းမှ ဦးတေဇပိုင်သည့် Yangon United FC အသင်းအား အောင်ဆန်းအားကစားကွင်းကို အိမ်ကွင်းအဖြစ် အသုံးပြုခွင့် ပေးထားပြီး လှိုင်ကွင်းကိုမူ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းအဖြစ် ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလပိုင်း၌ နှစ်သုံးဆယ် အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့သည်။
ဦးတေဇ၏ မူလအစီအစဉ်အရ အောင်ဆန်းကွင်းကို စင်္ကာပူမှ ATS Landscaping and Construction ကုမ္ပဏီ နှင့် MFF တို့၏ သဘောတူချက်ဖြင့် မြက်ခင်းတုကွင်းအဖြစ် ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သော်လည်း အောင်ဆန်းကွင်းသည် နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်များ ကျင်းပသည့် အားကစားကွင်းများထဲတွင် ပါဝင်သဖြင့် FIFA က ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်း MFF မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဘောလုံးကစားကွင်း တခုတည်းကိုသာ မြက်ခင်းတုများ ခင်းမှာဖြစ်ပြီး ကွင်းပတ်လည် တလျှောက်တွင်မူ ဂျပန်မြက်များ ဝယ်ယူ၍ ခင်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
မြက်တုများ ခင်းပြီးနောက် လှိုင်ကစားကွင်းအား Yangon United FC အသင်း အိမ်ကွင်းအဖြစ် ကစားနိုင်ရန် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သို့ လျှောက်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများ လာရောက်ကစားလျှင်လည်း အခကြေးငွေဖြင့် ငှားရမ်းရန်လည်း အစီအစဉ်ရှိကြောင်း အသင်းမန်နေဂျာက ပြောသည်။
ရန်ကုန်ယူနိုက်တတ်အသင်း ဥက္ကဌမှာ ဦးတေဇ၏သား ဦးဖြိုးတေဇ ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို့ခံ ပရိတ်သတ်များအား စွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စည်းရုံးလျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ဝေဖန်နေကြသည်။
Yangon United FC အသင်းသည် အသင်းအောင်မြင်မှုအတွက် ယခုနှစ် ဘောလုံးရာသီတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ အားကစားသမားအသစ်များဖြင့် အားဖြည့်ထားသော်လည်း အသင်း၏ ရလာဒ်မှာ အလယ်အလတ် အဆင့်၌သာ တည်ရှိသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 1:18:00 AM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မန်မာပြည်အထက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း နယ်စပ်တလျှောက်၌ ယခုနှစ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ပိုမိုများပြားလာနေပြီး အချို့ဒေသတွင် တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ လုပ်ငန်းရှင်များက ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပေးနေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
၎င်းက “မိုးကောင်း၊ နမ္မတီးဘက်က နယ်ခံတွေ တဦးကို ဧက ဆယ်ချီ၊ ရာချီ လုပ်နေတာ။ နေ့စားအလုပ်သမားတွေကိုလည်း အများကြီးငှားပြီး လုပ်နေတာ။ လုပ်အားခက တရက်ကို ကျပ် သုံးထောင်ကနေ သုံးထောင့်ငါးရာ ရှိတယ်။ လုပ်အားခရှင်းတာကို တရက် တရက် သိန်းပိုင်းရှိလို့ ငွေအားများများနဲ့ အကြီးအကျယ် လုပ်နေတာ။ သိရတာက သူတို့တွေက ငိုစား ရယ်စားပဲ။ တရုတ်တွေက ငွေစိုက်ထုတ်ပေးထားတယ်။ ဘိန်းထွက်လာရင် ဝေစုထဲကနေ ထပ်ရဦးမယ်” ဟု ပြောသည်။
နမ္မတီးနှင့် တနိုင်းမြို့ ဆက်သွယ်ထားသည့် လီဒိုလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ လဝကျေးရွာမှစ၍ တနိုင်းအထိ လမ်းဘေး တောတောင်များတွင် စိုက်ပျိုးနေကြပြီး လမ်းတလျှောက်ရှိ ကျေးရွာအာဏာပိုင်များက ဘိန်းစိုက်တောင်သူများထံမှ ငွေကြေးကောက်ခံကာ နယ်မြေခံ စစ်တပ်များကို ဆက်ကြေးပေးဆောင်နေရသည်ဟု ကျေးရွာအာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သူ တနိုင်းဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “လီဒို လမ်းတလျှောက်မှာ စိုက်တာက လမ်းဘက်က မမြင်ရအောင်တော့ စိုက်ရတာပေါ့။ ကျေးရွာလူကြီးတွေက သူတို့ ရွာနားစိုက်တဲ့သူတွေဆီက ငွေကောက်ပြီး၊ တနိုင်း ဒကစ (ဒေသကွပ်ကဲရေး စစ်ဌာနချုပ်)၊ မိုးကောင်း စကခ (အမှတ်-၃ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်) တို့က တပ်တွေကို ငွေပေးရတယ်၊ သူတို့လည်း နည်းနည်းပါးပါးတော့ ရမှာပေါ့။ အခုက စိုက်တောင်ပြီးနေပြီ။ ဘိန်းခြစ်တဲ့အချိန်ကျရင် ငွေပြန်ကောက်ပြီး ထပ်ပေးဖို့ ရှိသေးတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆဒုံးဒေသတွင် ဘိန်းခင်းအများအပြား စိုက်ပျိုးထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံသား ကျပန်းအလုပ်သမားများ မြန်မာပြည်ဘက်သို့ ယခုနှစ် မိုးတွင်းပိုင်းက သွားရောက်ကာ နေ့စားလုပ်ခ စရိတ်ငြိမ်း တရုတ်ငွေ (၅ဝ) ယွမ် (ယခုငွေလဲနှုန်းအရ မြန်မာငွေ ကျပ် ၇,ဝဝဝ) ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ လာမည့် ဘိန်းခြစ်ရာသီတွင် ထပ်မံသွားရောက်ရန် အားခဲနေကြကြောင်း တရုတ်ပြည်၊ ထိန်ချုံးဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ထိန်ချုံးခရိုင်ထဲက ကူရုံးနယ်သားတွေ သွားလုပ်တာများတယ်၊ စားပြီးသောက်ပြီး ယွမ် (၅ဝ) ဆိုတော့ လုပ်အားခ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ ဘိန်းစိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင် တောခုတ်၊ မီးရှို့၊ မြေပေါက်၊ မြေသြဇာထည့်နဲ့ တလလောက်လုပ်ရတယ် ပြောတယ်။ အစေးခြစ်တဲ့အခါလည်း အဲလို (၁၅) ရက်၊ တလလောက်ထိ လုပ်ရတယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဘိန်းစိုက်ချိန်၊ အစေးခြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင် ဒီဘက်မှာလည်း အလုပ်သမားတွေ ရှားသွားလို့ လုပ်အားခတွေတောင်ဈေးတက်တယ်၊ နှစ်တိုင်းပဲ အဲလို ဖြစ်နေတာ” ဟု ပြောသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 5:33:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 5:25:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း အန်အယ်လ်ဒီလူငယ်တဦး အကြောင်းမဲ့ ရဲအရိုက်ခံရ
်ကုန်တိုင်း အန်အယ်လ်ဒီ လူငယ်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင် ကိုမင်းနိုင်ကို လှည်းကူးမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ကြပ် ဝေဖြိုးဦးက အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့မှုတရပ် ထောက်ကြံ့မြို့နယ်အတွင်း နိုဝင်ဘာ (၁၉) ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကိုမင်းနိုင်က လှည်းကူးလူငယ်ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က သူက ထောက်ကြံ့ဘက်ကနေ ရန်ကုန်ကိုသွားဖို့ ကားစောင့်နေတုန်းမှာ ရဲတပ်ကြပ် ဝေဖြိုးဦးက ဆိုင်ကယ်နဲ့ ရောက်လာပြီး မင်းက လှည်းကူးက မင်းနိုင်လားလို့မေးတယ်။ သူက ဟုတ်ပါတယ်လို့ ပြန်ဖြေတော့ မင်းတို့ အန်အယ်လ်ဒီကို ငါတို့ရဲက ရိုက်တယ်ကွာဆိုပြီး ဖိနပ်ချွတ်ပြီး နားအုံတွေ၊ မျက်နှာတွေကို ရိုက်တယ်တဲ့ဗျာ” ဟု အန်အယ်လ်ဒီဗဟို ပြန်ကြားရေးမှ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
ထိုသုို့ရိုက်နှက်စဉ် ရဲတပ်ကြပ်ဝေဖြိုးဦး၏ ဆိုင်ကယ်နောက်မှပါလာသော လှည်းကူးမှ ရှေ့နေ ကိုစိုးမင်းဝင်းဆိုသူက မလုပ်ရန်တားမြစ်ခဲ့သော်လည်း ရဲတပ်ကြပ်ဝေဖြိုးဦးက လက်မခံဘဲ ဆက်လက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအရိုက်ခံရမှုအတွက် ထောက်ကြံ့ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်တိုင်ကြားရာ အရိုက်ခံရသူ ကိုမင်းနိုင်ကို အရက်သောက်ထားမထား ဆေးအရင်စစ်ပြီးမှ အမှုဖွင့်ပေးနိုင်မည်ဆိုကာ အင်းစိန်ဆေးရုံသို့ ဆေးစစ်ခိုင်းခဲ့သည်ဟု ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
၎င်းက “နောက်တော့ အင်းစိန်ဆေးရုံက နားနှာခေါင်းဆေးရုံကို ဆက်လွှဲတယ်။ နားနှာခေါင်းဆေးရုံကျမှ သိလိုက်ရတာက အရိုက်ခံထားရမှုကြောင့် နားစည်ပေါက်သွားတာ။ အတွင်းလူနာအဖြစ်တော့ မတင်ဘူးဗျာ။ ဆေးပေးပြီးပဲ ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရမှုကို ယမန်နေ့ကမှ ထောက်ကြံ့ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီး ထောက်ကြံ့ရဲစခန်းတွင် စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုမပြုဘဲ မှော်ဘီရဲစခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“မနေ့က ညနေ (၄) နာရီအထိ စစ်မေးတယ်။ ဒီနေ့ သက်သေတင်ဖို့ ရဲစခန်းက ပြောလိုက်တယ်။ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာက လူစည်ကားတဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တာ။ မျက်မြင်သက်သေတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အနီးမှာရှိတဲ့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်က လူတွေကလည်း တွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကို သက်သေအဖြစ်တင်မယ်။ တင်ထားတဲ့ သက်သေခေါ်ဖို့ကတော့ ရဲဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းတွေဖြစ်သွားပြီ” ဟု ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
အဆိုပါအမှု ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ကြံ့ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဖုန်းကိုင်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 5:23:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကာလ INGO လုပ်ငန်းများ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းဖွယ်ရှိ
ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသော အစိုးရမဟုတ်သည့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ INGO အနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းရဖွယ်ရှိကြောင်း INGOအသိုင်းအ၀န်းက ဆိုသည်။
အစိုးရက တစုံတရာ တရားဝင် အတည်ပြု ထုတ်ဖော် ကြေညာခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ယခုအခါ အဆိုပါသတင်းသည် INGOများအတွင်း ပျံနှံလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
INGOတာဝန်ရှိသူများကလည်း ပြင်ဆင်စရာများကို ဆောင်ရွက်ရန် ရှေ့နေဖြစ်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခါနီးတော့ သူတို့ INGO တွေက အကုန် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်ရမယ့် သဘော ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်ဗျ၊ တိတိကျကျကြီးတော့လည်း မထွက်သေးဘူး၊ သူတို့ကတော့ သတင်းကြားပြီးနေပြီ၊ ဒီမှာ INGO လုပ်ငန်းတွေက ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှပဲ ပြန်လာရင် လာရမယ်ထင်တယ်၊ ဒါကတော့ မပြောတတ်ဘူး”ဟု ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရ အနေဖြင့် မြန်မာပြည်အတွင်းရှိ INGOများကို ခေတ်သစ် နယ်ချဲ့ဝါဒ၏ အသုံးချစရာ လက်နက် တခု အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး INGOများအား နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရန်၊ ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ခြင်း မရှိရန်၊ ကိုယ်ကျိုး စီးပွားရှာဖွေချင်းမပြုရန်၊ အစိုးရနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော အဖွဲအစည်းဖြစ်ရန် အတွက်သတိပေးထားသည်။
၂၀၀၈ မေလ အစောပိုင်းကလည်း မြန်မာပြည်အတွင်းရှိ INGO လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်က သတ်မှတ် ပေးထားသော အချိန်ကာလကို လျှော့ချမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
INGOအဖွဲ့တဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ၀န်ထမ်းတဦးက“ကျနော်တို့ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေဆီကနေ ဒီကိစ္စကို ကြားထားပါတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာ INGOတွေက သူတို့လုပ်ငန်းတွေကို ခဏနားထားရမယ်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန အပါအ၀င် တခြားဌာန တခုကမှ ဒီအကြောင်းကို စာမထုတ်သေးဘူး” ဟု ဆိုသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊မေလတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သော နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူပေါင်း တသိန်းလေးသောင်းနီးပါး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေသစ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပနေစဉ် အချိန်တွင် စစ်အစိုးရသည် ပြည်ပမှပေးသော အကူအညီများကို လက်ခံ ရယူရန် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်များအနေဖြင့်လည်း ပြည်ပ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့များ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားပါက စားဝတ်နေရေးအတွက် စိုးရိမ်နေသကဲ့သို့ ၊ အစိုးရကလည်း အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များ ထွက်ခွာသွားလျှင် ၄င်းတို့နှင့်အတူ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသမှ သတင်းများ ပါသွားမည်ကို စိုးရိမ်နေသည်ဟု သိရသည်။
မေလ အတွင်းကလည်း ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ရုံးတင် တရားစွဲဆို ခြင်းကြောင့် ပြည်ပအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ ၂၀၀ ခန့်သည် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ အခက်အခဲကြောင့် ကြန့်ကြာခဲ့ဖူးသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 5:18:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရောင်းစားခံရသည့် ကချင်လူငယ်များ ပြန်လည်လွတ်မြောက်
တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ရောင်းစားခံရသည့် ကချင်ပြည်နယ် မိုင်ဂျာယာန် ဒေသမှ လူငယ် ၃၁ ဦးသည် ဒေသခံ အာဏာပိုင်များ၏ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ယခုလဆန်းတွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာ ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ရောင်းစားမှုသည် ယင်းဒေသမှ ပထမဆုံးအကြိမ် လူငယ် ယောက်ျားလေးများ လူကုန်ကူးခံရခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အသက် ၁၆ နှစ်မှ အသက် ၂၀ အတွင်း ရှိသူများ ဖြစ်သည်ဟု မိသားစုဝင်များ အပါအ၀င် နီးစပ်သူများက ပြောဆိုသည်။
“သူတို့ သူငယ်ချင်း တယာက်က တရုတ်နိုင်ငံ ကောင်းတုန်မှာ အလုပ်ပေါပြီး လစာကောင်းတယ် သွားရအောင် ဆိုပြီး ခေါ်သွားတာ”ဟု ရောင်းစားခံရသူ မိသားစုဝင်တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်း လူကုန်ကူး ခံရသူများတွင် မိုင်ဂျာယာန်ရှိ Economic and Education Development for Youth (EEDY) ပညာမြှင့် တင်ရေးအဖွဲ့၏ ထွယ်နိမ်ရှောင် (Htoi Ningshawng) အမည်ရ ဘော်ဒါဆောင်မှ လူငယ် ၃ ဦးလည်း ပါဝင်ကြောင်း ဘော်ဒါအုပ် ဖြစ်သူက ပြောပြသည်။
“အခုလွတ်လာတဲ့ ၃၁ ယောက်ထဲမှာ ကျမတို့ ကလေး ၃ ယောက်ပါတယ်၊ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ပြန်ကြပြီ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ EEDY အဖွဲ့သည် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) က တည်ထောင်ထားသော လူငယ် စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ယင်းရောင်းစား ခံရသူများသည် တရုတ်နိုင်ငံ ကောင်းတုန် ဒေသရှိ သံစက်ရုံ၊ ကော်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော အိုးခွက်၊ ပန်းကန်၊ ဇွန်း၊ အရုပ်များ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများတွင် အလုပ်လုပ်ရကြောင်း သိရသည်။
“လမ်းစရိတ်တွေ အရင်လုပ်ဆပ်ရမယ် ဆိုပြီး လစာကို တလ မုန့်ဖိုးလာက်ရှိတဲ့ ယွမ် ၄၀-၅၀ (ကျပ် ၅,၇၁၄-၇၁၄၂) လောက် ပဲရတယ်”ဟု အထက်ပါ မိသားစုဝင်က ပြောပြသည်။
မိုင်ဂျာယာန် ဒေသတွင်ပင် ပျမ်းမျှ လုပ်အားခ တလလျှင် ယွမ် ၆၀၀ မှ ၈၀၀ (ကျပ် ၈၅,၇၁၄ မှ ၁၄,၂၈၅) ကြား ရှိသည်ဟု လည်း ဆိုသည်။
ကောင်းတုန် ဒေသရှိ လုပ်အားခ အမှန်မှာ တလလျှင် ယွမ် ၁၂၀၀ မှ ၂၀၀၀ ကြား (ကျပ် ၁၇၁,၄၂၈ မှ ၂၈၅,၇၁၄) ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ လူကုန်ကူးမှုများ ဖြစ်စေရန် ဒေသ၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အခြေအနေ များကလည်း တွန်းအားပေးနေကြောင်း မိုင်ဂျာယာန် အုပ်ချုပ်ရေးရုံး အရာရှိတဦးက ပြောဆိုသည်။
“မိန်းမသားနဲ့ ကလေးတွေကို ရောင်းစားတဲ့အမှု ဖြေရှင်းနေရတာက နယ်စပ်မှာ အလုပ်တခုပါ၊ ဒါပေမယ့် ဒီလိုယောက်ျား လေးတွေ ရောင်းစားခံရတဲ့ အမှုက ကျနော့်ဘ၀မှာ ဒါပထမဆုံး ဖြေရှင်းခြင်းပါ၊ သူက လူခေါ်ရောင်းစားတာ အကြိမ်ကြိမ်ရှိပြီ၊ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ ပိုက်ဆံရှာရ လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကြောင့် မိဘတွေကိုယ်တိုင် လာအပ်ထားတာ၊ ရောင်းစားတယ် ဆိုပေမယ့် လမ်းစရိတ်နဲ့ အလုပ်ရှာပေး ခလောက်ပဲ ယူထားတယ်ဆိုတော့ ဆုံးမတာ လောက်ကလွဲလို့ ကြီးကြီးမားမား ပြစ်ဒဏ် မရှိပါဘူး”ဟု ၎င်းကဆို သည်။
မိုင်ဂျာယာန် ဒေသရှိ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးနှင့် လူကုန်ကူးမှု ပပျောက်ရေး လှုပ်ရှားသူ တဦးကမူ “ဒီလိုအမှုလည်း လူကုန်ကူးမှုပါပဲ၊ ကျမတို့ အနေနဲ့ တကယ် လက်တွေ့ဖြေရှင်းမယ် ဆိုရင်တော့ ဒါ လူသား အချင်းချင်း ခေါင်းပုံဖြတ်မှုပါ”ဟု ပြောသည်။
၂၀၀၆ ခုမှ၂၀၀၈ ခုနှစ် အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းစားခံရသူ ကလေးနှင့် အမျိုးသမီးပေါင်း (၁၂၈) ဦး နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် (၄၈) ဦး ရှိသည်ဟု KIO ဗဟို အမျိုးသမီး အဖွဲ့ချုပ်ရုံး(လိုင်ဇာ) ၏ စာရင်းက ဆိုသည်။
လက်ရှိ အခြေအနေအရ ယခု လူကုန်ကူးမှု ပြုလုပ်သူ ၂ ဦးကို မိုင်ဂျာယာန် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များက ထိန်းသိမ်းထားကာ အမှုဆက်လက် စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 5:17:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဟတ်ကြီးစီမံကိန်းက ထိုင်း-မြန်မာ ဒေသခံများကို ထိခိုက်မည်ဟု TERRA က ပြော
သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် ဟတ်ကြီးရေကာတာ စီမံကိန်းသည် ထိုင်း-မြန်မာနှစ်ဖက် ဒေသခံ များကို ထိခိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် TERRA က ပြောသည်။
“ဒီစီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးက မြန်မာပြည်ဘက်ခြမ်းတွင် မဟုတ်ဘူး။ မဲဟောင်ဆောင်မှာရှိတဲ့ မြစ်တွေရေလျှံလာတာမျိုးတွေ ရှိလာမယ်။ ပြီးတော့ မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ဒေသခံ ကရင်လူထုက ထိုင်းဘက်ကို ရွှေ့ပြောင်းလာကြမှာ” ဟု ထိုင်းအခြေစိုက် TERRA မှ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ မစ္စတန်ရူဒီ က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
TERRA သည် ဟတ်ကြီးရေကာတာ၏ အကျိုးဆက်များကို ဒေသခံ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလေ့လာနေသည်မှာ ၃ နှစ်ခန့်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် TERRA အပါအဝင် ထိုင်းအခြေစိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်း ၁၈၉ ဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း ဒေသခံကရင်ရွာသားများနှင့် စုပေါင်း၍ ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် စီမံကိန်း မှ နှုတ်ထွက်ရန် ထိုင်းအစိုးရ အိမ်တော်ရှေ့၌ ယမန်နေ့က ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြသေးသည်။
ယင်းဆန္ဒပြပွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ် များက ဟတ်ကြီးရေကာတာစီမံကိန်းကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိုးများကို စာတစောင်ရေးသားကာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အာဘီဆစ် ဝေ့ချာချီဝ ထံသို့ ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါတောင်းဆိုချက်တွင် စီမံကိန်းကြောင့် ဒေသတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည့် အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝသယံဇာတများ ပျက်စီးကာ ဒေသခံလူထု၏ အသက်ရှင် ရပ်တည်ရေးကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း ပါရှိသည်။
လျှပ်စစ်အား ၁၃၆ဝ မဂါဝပ် ထုတ်နိုင်မည့် ဟတ်ကြီးရေကာတာတည်ဆောက်ရန် မြန်မာ့လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၊ ထိုင်းနိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (EGAT) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံပိုင် Sinohydro ကုမ္ပဏီတို့အကြား ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရေကာတာသည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှ ၄၇ ကီလိုမီတာခန့်ကွာဝေးပြီး ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-ကေအန်ယူ လှုပ်ရှားထိန်းချုပ်သည့် နယ်မြေအတွင်း၌ တည်ရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်တွင်မူ မြောက်ပိုင်းခရိုင်ဖြစ် သည့် မယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်အတွင်း ပါဝင်သည်။
ဟတ်ကြီးရေကာတာတည်ဆောက်ရေးသည် ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဆန္ဒအရသာဖြစ်သော်လည်း ရေကာတာအတွက် လုံခြုံရေးမှာမူ မသေချာကြောင်း ကေအန်ယူ ဒုဥက္ကဌ စောဒေးဗစ်တာကပေါက ပြောသည်။
“အခု ဆည်နေရာက conflict zone လို့ခေါ်တဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာ၊ ရန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်တဲ့နေရာ ဖြစ်နေ တယ်။ ဆည်ရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကတော့ မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လုံခြုံပါ့မလဲ” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
စီမံကိန်းကြောင့် သံလွင်မြစ်ကြောင်းတလျှောက်မှ ကရင်ကျေးရွာများဖြစ်သည့် မဲဆိပ်၊ တောင်ကြား၊ ရင်းပိုင်း၊ မယ်ပ၊ ရော်ပိုး စသည့် ကျေးရွာများအပါအဝင် ရွာပေါင်း ၄ဝ ကျော် ရေလွှမ်းမိုးမှု ဒဏ်ကို ခံရနိုင်ကြောင်းလည်း ကရင်မြစ်များစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (Karen Rivers Watch) မှ အမည်မဖော်လိုသူ အလုပ်အမှုဆောင်တဦးက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 5:15:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်စုနှင့် စစ်အစိုးရတွေ့ဆုံရန် အလားအလာနည်းနေဟု ဦးဝင်းတင်ပြော
စစ်အစိုးရအတွက် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲသည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အခန်းကဏ္ဍထက် ပိုမိုအရေးပါနေသဖြင့် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် နည်းပါးကြောင်း အန်အယ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းတင်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 5:14:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့အကြီးဆုံး ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကို လာမည့်လတွင် စမ်းသပ် လည်ပတ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ပြောသည်။
“ဖွင့်မှာကတော့ တာဘိုင်လေးလုံးထဲက တလုံးပေါ့လေ။ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းမှာဖွင့်မှာ။ နောက်ပိုင်းမှာ တလုံးပြီး တလုံး ဒီလိုပဲ ဖွင့်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ရက်ကိုတော့ အတိအကျတော့ မသိဘူးလေ။ ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ် လောက်တော့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်” ဟု ယင်းဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးရာဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်အေးအေးသန့်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ယင်းဝန်ကြီးဌာန အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ ဝန်ထမ်းအချို့ စီမံကိန်းဖွင့်လှစ်မည့် နေရာသို့ စတင်ရောက်ရှိ နေပြီဖြစ် ကြောင်းလည်း သိရသည်။
မန္တလေးမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၃၁ မိုင်ခန့်အကွာ ရဲ-ယမန်း ကျေးရွာအနီး ဒုဋ္ဌဝတီမြစ် (ခေါ်) မြစ်ငယ်မြစ်ကို ပိတ်၍ တည်ဆောက်နေသည့် ယင်းစီမံကိန်းကို အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန အမှတ် (၂) တည်ဆောက်ရေးက တာဝန်ယူထားသည်။
ယင်းစီမံကိန်းသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆ဝဝ ကျော်ကုန်ကျပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ချေးငွေ သန်း ၂ဝဝ ပါဝင်ကာ ကျန် သန်း ၄ဝဝကျော်ကို နိုင်ငံပိုင်ငွေဖြင့် တည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းနှင့် China International Trust & Investment Co. (CITIC) နှင့် Sinohydro Corporation စသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများအကြား ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်၌ ယင်းစီမံကိန်းအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး နောက် ပိုင်းတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီ ၅ ခု ထပ်မံ ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်း Burma River Network က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
စီမံကိန်း စတင်နိုင်ရေး အတွက် ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ Nippon Koei ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ တင်သွင်း ခဲ့ပြီး အသေးစိတ် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Colenco Power Engineering ကုမ္ပဏီနှင့် ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
လာမည့်နှစ်တွင် စက်အားလုံးလည်ပတ်နိုင်မည်ဟု လျာထားသော ရဲရွာရေကာတာသည် အလျား ၂၂၆၄ ပေ၊ အမြင့် ၄၃၃ ပေ ရှိ၍ လျှပ်စစ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၇၉ဝ ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်း အပြည့်အဝ ပြီးစီးပါက ကျောက်ဆည်၊ မိတ္ထီလာနှင့် မန္တလေးမြို့များမှတဆင့် ကီလိုဗို့ ၂၃ဝ အားရှိသော ကေဘယ်ကြိုးများ အသုံးပြု၍ တနိုင်ငံလုံးသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ပေးနိုင်မည်ဟု သိရသည်။
အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်နေသော ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း အနည်းဆုံး ၁၅ ခု ရှိပြီး ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် တို့တွင် အသီး သီး တည်ရှိသည်။
အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများကမူ ရေကာတာစီမံကိန်းများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်ဆီးမှု၊ ကျေးရွာ များ ရွှေ့ပြောင်းခံရမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတို့ကို ထောက်ပြကန့်ကွက်နေကြပြီး ရေကာတာများ ပျက် ဆီးပါက အောက်ပိုင်းရှိ ဒေသများ ရေလွှမ်းမိုးမည့် အရေးကိုလည်း စိုးရိမ်နေကြသည်။
ယခုအချိန်အထိ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး၏ စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်မှု ပမာဏမှာ ၁၆၈၄ မီဂါဝပ်ရှိပြီး၊ စစ်အစိုးရ၏ တရားဝင်စာရင်းဇယားများအရ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ လျှပ်စစ်ပမာဏ ကီလိုဝပ် ၆.၆၂ ဘီလီယံကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆင်ဝှာသတင်းတပုဒ်က ဖော်ပြသည်။
သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ လျှပ်စစ်မလုံလောက်သဖြင့် ပြည်သူများ နေ့စဉ် စားဝတ်နေရေးနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်လျက်ရှိနေသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 5:13:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ရေယာဉ်များကို ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်
ဧရာဝတီတိုင်း အတွင်းရှိ ခရီးသည် တင်ဆောင်သော ရေယာဉ်များကို ညပိုင်းအချိန် မမောင်းနှင်ရန် အစိုးရ အာဏာပိုင်များက အမိန့်ထုတ် ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
စက်တပ်ရေယာဉ်များ အနေဖြင့် နံနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ အချိန်အတွင်း ထွက်ခွာရန်နှင့် ဆိုက်ကပ်ခွင့်များ ကို အမိန့် ထုတ်ထားသည်ဟု ပုသိမ်မြို့ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
ခရီးသည်တင်ဆောင်သည့် ရေယာဉ်အားလုံး ညအချိန် မမောင်းနှင် အမိန့်ထုတ်ထားပြီး အမိန့်ထုတ်ရသည့် အကြောင်းကိုမူ မသိရသေးကြောင်း ၎င်း တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက ပုသိမ်မြို့ရှိ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်များကို ယခုလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အစည်းအဝေးတရပ် ခေါ်ကာ ညပိုင်းအတွင်း မမောင်းရန် အသိပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရသည်။
“အရင်ကတော့ ကျနော်တို့ ည ၉ နာရီထွက်တယ်၊ အခုဒီ သင်္ဘော တွေကိစ္စ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တော့၊ မနက် ၆နာရီ ကနေ ညနေ ၆ နာရီ ညလုံးဝ မသွားရတော့ဘူး”ဟု ပုသိမ်မြို့ရှိ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို သင်္ဘောများကို အချိန်ကန့်သတ်ပေးလိုက်သောကြောင့် နယ်မှ ထွက်ခွာလာပြီး ရန်ကုန်သို့ သွားမည့် ခရီးသည်များအတွက် အခက်အခဲများ ကြုံရနိုင်ကြောင်းလည်း ၎င်း ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်က ပြောသည်။
“တောကနေပြန်တက်တဲ့ ခရီးသည်တွေဆို မမီတော့ဘူးလေ၊ ပုသိမ်မှာဆို နောက်ဆုံး ရန်ကုန် ဂိတ်သိမ်းကားက ၃ နာရီခွဲဆို ဂိတ်သိမ်းသွားပြီး၊ သင်္ဘောက ဒါနဲ့ နောက်ကျဝင်လာရင်တော့ ပုသိမ်မှာ အိပ်ရမယ်၊ ဒါတွေတော့ အခက် အခဲရှိတယ်”ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က ပုသိမ်မြို့၊ ရှမ်းဂူကျေးရွာအနီးရှိ င၀န်မြစ်တွင် ပုဂ္ဂလိက ခရီးသည်တင် သင်္ဘောကြီး ၂ စင်း တိုက်မိပြီး နစ်မြုပ်သွားပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ ညအချိန် ထွက်ခွာခွင့်များ ကန့်သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နစ်မြုပ်သွားသည့် သင်္ဘောမှာ “နေမျိုးထွန်း” ဟု အမည်ပေးထားသည့် ရေယာဉ်အမှတ် (၈၄၁၃) သစ်သား တထပ် သင်္ဘော ဖြစ်ပြီး ပုသိမ်မြို့မှ သက်ကယ်သောင် ကျေးရွာသို့ ဦးတည် ထွက်ခွာလာစဉ် ရှမ်းဂူကျေးရွာ အနီးရှိ မြစ်ပြင်ကျယ်တွင် “ဓန” အမည်ရှိ ဒီဇယ်ဆီတင် သင်္ဘောတွဲနှင့် တိုက်မိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ အဆိုရသိရသည်။
သင်္ဘော ၂စင်း တိုက်မှုကြောင့် ခရီးသည် ၄၀ ကျော် သေဆုံးပြီး ၅၀ ခန့်မှာ ပျောက်ဆုံးနေသေးကြောင်း ဒေသခံ များကဆိုသည်။
သို့သော် အာဏာပိုင်များက သင်္ဘောပိုင်ရှင်ကို အမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီး ရေယာဉ် နစ်မြုပ်ရသည့် အကြောင်း ရင်းကို ဆက်လက် စုံစမ်း စစ်ဆေးနေသည်ဟုလည်း သိရသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 2:27:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 2:14:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အပစ်ရပ်အသွင်ပြောင်း ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့များအား သုံးမျိုးသုံးစား ဖွဲ့ပေးမည်
နယ်စပ်တွင်ရှိနေသည့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအား နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းများ ဖွဲ့ပေးမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ နယ်စပ်နှင့်အလှမ်းဝေးသည့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကို ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့များအဖြစ် လူအင်အားပေါ်မူတည်၍ (၃) မျိုး ဖွဲ့စည်းရန်ရှိနေသည်။
ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့များကို လူအင်အားအလိုက် သုံးမျိုးသုံးစား ခွဲခြားထား ကြောင်း၊ ပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့ကြီးတွင် လူအင်အား(၉ဝ) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းပြီး လူအင်အား(၆ဝ) ကို လက်နက်များတပ်ဆင်ပေးကာ ကျန်(၃ဝ) ကို အရံအင်အားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ အလတ်အား လူအင်အား (၆ဝ) ဖြင့် ဖွဲ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး (၄ဝ) အား လက်နက်တပ်ဆင် ပေးကာ ကျန်(၂ဝ) အား အရံအင်အားအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ငယ်ကို အင်အား (၃ဝ) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ပြီး လူအင်အား(၂ဝ) ကို လက်နက်တပ်ဆင်ကာ ကျန်(၁ဝ) ကို အရံအင်အားအနေဖြင့် လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းသွားရန် ရှိသည်ဟု အပစ်ရပ်အဖွဲ့များနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကချင် ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်တို့ကျတော့ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ကြီးတွေ ဖွဲ့ခိုင်းနေတာပေါ့။ ကောင်းခါမှာအခြေစိုက်လို့ ကောင်းခါ ပြည်သူ့စစ်ဆိုပြီး ဖွဲ့ဖို့ရှိတယ်၊ ကောင်းခါ (၁) ၊ ကောင်းခါ (၂) ဆိုပြီး ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ပေးသွားမယ်။ သူကတော့ ပြည်သူ့စစ် ဖွဲ့မယ်ဆိုပြိး သဘောတူထားပြီသား၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကတော့ အဲဒါကို ဆွေးနွေးနေတုန်းပဲ” ဟု ပြောသည်။
ယင်းသို့ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အသက် (၅ဝ) ကျော်များပါ ပါဝင်နိုင်သကဲ့သို့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများက တပ်ဖွဲ့ နာယက အနေဖြင့် တာဝန်ယူသွားရန်ရှိနေပြီး အဆိုပါ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များကို သက်ဆိုင်ရာ စစ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲသွားရန် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ အထူးဒေသ(၄)၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်တပ်မတော် (NDAA-SESS) ခေါ် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ကလည်း အဆိုပါ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဲ့သို့ မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းသွားလိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းထားပြီး နအဖဘက်ကမူ တပ်မတော်သားများနှင့် ရောနှောဖွဲ့စည်းမည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းကိုသာ လက်ခံရန် ဖိအားပေးနေသည်။
အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကို နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းနှင့် ပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ရာတွင် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် ကချင်ပြည် ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော်အား နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း (၃) ရင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနယ်စပ်အနီး ကယားပြည်နယ်၊ အထူးဒေသ(၂)၊ ကလလတအဖွဲ့အား နယ်ခြားစောင့် တပ်ရင်း(၂) ရင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့မှ ခွဲထွက်ခဲ့သည့် ဦးလဆန်အောင်ဝါ ဦးဆောင်သည့် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ဂွေထူကျေးရွာ အခြေစိုက်၊ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အား အင်အား(၃ဝ) စီ ပါဝင်သည့် ကဝါးယန်ပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့နှင့် ဂွေထူပြည်သူ့စစ်အဖြစ် လည်းကောင်း မကြာသေးမီက မြန်မာစစ်အစိုးရက ဖွဲ့စည်း ပေးထားသည်။ ခေတ်ပြိုင်မှတဆင့်
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 2:12:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
မေငြိမ်း blog မှတဆင့်
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 2:05:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ခေါင်းလောင်းထိုး လှူဘို့ကောင်းတဲ့ ၀န်ကြီးတွေ(ရေးသူ-သခင်ဘမောင်)
၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၅ရက်က ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအိမ်သို့ ကျွန်တော် ရောက်သွားပါသည်။ ဆရာကြီးကို ရှိခိုးဦးချပြီး ဆရာနေထိုင်ကောင်းပါရဲ့လားဟု မေးသောအခါ၊ အေး၊ သခင်ဘမောင်လားဟေ့၊ လူတော့ နေကောင်းပါတယ်ကွယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းတို့ကို ဖမ်းသွားတဲ့နောက်၊ ဆရာလဲ စိတ်လက် တယ်မကောင်းပါဘူး။ အထူးသဖြင့် မျက်စေ့တဖက်က ကောင်းကောင်း ကြည့်မရအောင် ဖြစ်သွားတယ်ဟု ဆရာကြီးက မိန့်ကြားပါသည်။
ကျွန်တော့်မှာ ၁၉၅၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်က အဖမ်းခံရပြီး၊ ပထမ အင်းစိန် တွဲဘက်ထောင်၊ ၎င်းမှ ပြည်ထောင်၊ သရက်ထောင်၊ ထိုနောက် ကိုကိုးကျွန်းထောင် တွင် တနှစ်ခန့်ထားပြီး၊ အင်းစိန်ထောင်ကြီးသို့ ပြန်ပို့ကာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် လွှတ်လိုက်ပါသည်။ ထောင်ကလွတ်ပြီး ၅ ရက် အကြာ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအိမ်သို့ သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီးနှင့် စပ်မိစပ်ရာပြောရင်း "တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရှစ်ဦး အဖွဲ့ကြီးကိုလဲ ဖျက်လိုက်ကြပြီကွဲ့။ တို့ နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရသေးတာ မဟုတ်ဘူး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး မရသေးသမျှလဲ ဘာမှ အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်လို့ရမယ် မထင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တော့ ရှိနေဘို့ ကောင်းတာပေါ့" ဟု ဆရာကြီးက ဆက်လက်မိန့်ကြားပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ဆရာ၊ ကျွန်တော်လဲ ထောင်က ပြန်လွတ်လာတာ ငါးရက် ရှိပါသေးတယ်၊ အိမ်လဲ အဖျက်ခံထားရလို့ မိတ်ဆွေတယောက်အိမ်မှာ ခဏ တက်နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ပြန်ဖွဲ့နိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားပါမယ်။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာလဲ အမိန့်ရှိပါဦးလို့ ကျွန်တော်က ပြောသောအခါ၊ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာတော့ စဉ်းစားကြပေါ့ကွယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရဘို့အတွက် နည်းစပ်မယ်ထင်တဲ့ လမ်းစတခုကတော့ အရင် 'မောင်နု' ပြောခဲ့တဲ့ အချက်သုံးချက်ကို တကယ် ဖြစ်မြောက်အောင် ဆက်ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ဆရာထင်တယ်။ အဲဒီ အချက်သုံးချက်ကို အရင်က ဆရာတို့ ရှစ်ဦးကော်မတီ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကရော၊ မောင်တို့ ပမညတ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစု) ကရော သဘောတူခဲ့ကြပြီး မဟုတ်လားဟု ဆရာကြီးက မိန့်ကြားပါသည်။
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း မိန့်ကြားသည့် "မောင်နု ပြောခဲ့ဘူးသော အချက်သုံးချက်" ဆိုသည်မှာ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက်နေ့ ကမ္ဘာအေးကုန်းတော် တန်ဆောင်းတွင် ကျင်းပသည့် ဖဆပလ ညီလာခံ၌ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုက ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တောတွင်းလက်နက်ကိုင်များအား ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့သော အချက်သုံးချက် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအချက်တို့မှာ-
(၁) ခင်ဗျားတို့နှင့် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူက မှားတယ်၊ ဘယ်သူက မှန်တယ်ဆိုတာ ပြောမနေကြပါနှင့်တော့။
(၂) ခင်ဗျားတို့ မှားတာရှိရင်လဲ ကျွန်တော်တို့က သည်းခံပါမယ်၊ ကျွန်တော်တို့ မှားတာ ရှိရင်လဲ ခင်ဗျားတို့က သည်းခံကြပါ။
(၃) ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၀ါဒချင်း မတူစေကာမူ ပြည်သူတို့ ကောင်းကျိုးအတွက် တူညီရာတွေကို လက်တွဲလုပ်ကြရအောင် လာခဲ့ကြပါတော့။
ဟူသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက် သုံးချက်၏ အနှစ်သာရမှာ ၂ ဘက် အာဃာတ မထားရေး၊ သင်ပုန်းချေရေး၊ အလုပ်အတူ ပူးတွဲလုပ်ရေးတို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီလိုဆိုရင် အဲဒီ အချက်များအပေါ် အခြေထားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းကြဘို့ ပြည်သူတရပ်လုံးကိုရော အစိုးရနှင့် တောတွင်းလက်နက်ကိုင် အင်အားစုများကိုရော ဆရာ့အနေနှင့် နှိုးဆော်ချက် ပထမထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက် ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ဖွဲ့ဘို့ ဆက်လုပ်ကြ ရမှာဘဲဟု ကျွန်တော်က အကြံပေးသည့်အခါ ဆရာကြီးက "အေး၊ တိုင်ပင်သင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တိုင်ပင်ပြီး အချိန်ရှိတုန်း လုပ်ကြကွယ်" ဟု ပြန်လည် မိန့်ကြားပါသည်။
ထိုနောက် ဆွေးနွေးသင့်သူများနှင့် ဆွေးနွေးကြပြီး ၁၉၆၀ ခုနှစ် မေလထဲတွင် ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက ပြည်သူ့အစိုးရနှင့် တောတွင်းလက်နက်ကိုင်များသို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းကြရန်အတွက် နှိုးဆော်ချက်တရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည့် နောက် ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းသည် ဆရာဝန်ကြီးဦးဆင်ဖိုးနှင့်အတူ အရှေ့ဂျာမနီနိုင်ငံ သို့ ထိုနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဆေးကုသရန် သွားရောက်ခဲ့လေသည်။
ဆရာကြီး ဆေးကုသွားရာမှ ပြန်ရောက်သောအခါ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ကြပါသည်။ အဖွဲ့တွင် ဆရာကြီးကိုယ်တိုင် ဥက္ကဌ တာဝန်ယူပြီး ဒုတိယဥက္ကဌများအဖြစ် သစ်တောအရေးပိုင်ဟောင်း ဦးဘသော်နှင့် ဗိုလ်မျူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇော၊ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ၀တ်လုံဦးထွန်းတင်၊ အမှုဆောင်လူကြီးများအဖြစ် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနှစ်မ ဒေါ်အိမ်စိုး၊ ၀တ်လုံဦးလှကျော်၊ ၀တ်လုံ ဦးဘကျော်၊ ဦးအောင်ဇေ (တော်ဘုရားလေး)၊ ဦးကျော်၊ လူထု ဦးတင်မောင်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ သခင်ထွေး၊ သခင်ဖေသန်း၊ သခင်ခင်အောင်၊ သခင်ဘမောင် (စာရေးသူ)၊ တို့က အကြံပေးလူကြီးများအဖြစ် တာဝန်ယူကြရပြီး၊ ဗန်းမော်တင်အောင်၊ လူငယ်များအစည်းအရုံး (ဗလစ)မှ ဦးစိုးမင်း၊ ၀တ်လုံဦးလှတင်တို့က အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တာဝန်ယူကြသည်။
ထိုအချိန်ကား ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုကြီးမှူးသော ပထစ (ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့) အစိုးရ လက်ထက် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့သည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပြည်သူသို့ တင်ပြခြင်း၊ အစိုးရနှင့် တောတွင်းအင်အားစုများကို အကြံပေးခြင်းတို့ လုပ်ရန် ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအိမ်၌ မကြာခဏ ဆွေးနွေးကြပါသည်။
တနေ့သ၌ ဆရာကြီးအိမ်တွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မည်သို့မည်ပုံ ဆောင်ရွက်သင့်သည် အစိုးရနှင့် တွေ့ရန်လိုမည် စသည်ဖြင့် စပ်မိစပ်ရာ ပြောကြပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် တစုံတယောက်က အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများမှာ ပုတီးစိတ်သူကစိတ်၊ ဥပုသ်စောင့်သူကစောင့်ဖြင့် တွေ့ရန်လွယ်ကူမည် မထင်ကြောင်း၊ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု ကိုယ်တိုင် လည်း ပုပ္ပါးတောင်တွင် ဥပုသ်ရက်ရှည်စောင့်နေကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ထိုအခါ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တယ်ဆိုတာ ပုတီးစိတ် ဥပုသ်စောင့်နေရုံနှင့် ပြီးတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဆရာတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအလိုအရ ပုတီးစိတ်တယ်၊ ဥပုသ်စောင့်တယ်ဆိုတာ အမှန်တော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အလုပ်ပါဘဲ။ ကိုယ်ကုသိုလ်ရဘို့၊ ကိုယ်တမလွန်ဘ၀ကူး ကောင်းဘို့အတွက်ပါဘဲ။ ဆရာ ဥပုသ်စောင့်ရင် လည်း ဆရာကုသိုလ်ရတာဘဲ။ အခြားသူများ မရကြပါဘူး။ အခြား မောင်နီ မောင်ဖြူတို့ ကုသိုလ်ရအောင် ဆရာက ဥပုသ်စောင့်ပေးလို့၊ အလှူဒါနပြုပေးလို့ မရပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက်သာ ကိုယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တယ်၊ တိုင်းသူပြည်သားတို့က မင်းအစိုးရအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရလို့ မင်းအစိုးရလုပ်တယ်ဆိုတာက တိုင်းသူပြည်သား အများ အကျိုးအတွက် လုပ်ဆောင်ကြရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်။ တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့ စားဝတ်နေမှု မျှတချောင်လည်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အတတ်ပညာသင်ကြားနိုင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးတို့ အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို အများအကျိုး သည်ပိုးတဲ့အခါ မြှောက်စားသင့်တာ မြှောက်စား၊ ဖိနှိပ်သင့်တာ ဖိနှိပ်၊ ဖယ်ရှားသင့်တာ ဖယ်ရှား၊ ပရိယာယ်ေ၀၀ုစ်လုပ်ပြီး လိမ်တန်လိမ်၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် သတ်သင့်ဖြတ်သင့်တာ ရှိရင်တောင် သတ်ဖြတ်ရသည်အထိ လုပ်ကြရတယ်။
သိင်္ဂိုကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ သီဟိုကျွန်းမှာ တစတစ၀င်ပြီး နယ်ချဲ့စိုးမိုးလာတဲ့ ကုလားများရဲ့ ဘေးရန်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သီဟိုလူမျိုး တိုင်းရင်းသားများအဖို့ နေစရာပြည်ကလဲ ကျဉ်းမြောင်း၊ စားစရာ ဆန်ရေစပါးလဲ နည်းပါးပြီး၊ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ကျောင်းကန်ဘုရားများ ကိုပင် အဖျက်ဆီးခံရသည်အထိ ဖြစ်ရတယ်။ အဲဒီအခါ ဒုတ္ထဂါမဏိမင်းကြီးဟာ တိုင်းသူ ပြည်သားတို့ အကျိုး၊ ဘာသာ သာသနာ အကျိုးတို့အတွက် ကုလားများကို သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်း ပြစ်ခဲ့ရဆို မဟုတ်လား။
မဟောသဓဇာတ်မှာလဲ ဘုရားအလောင်း မဟောသဓဟာ ကေးဝဋ်ပုဏ္ဏားကြီးနှင့် စကားစစ်ထိုးပြုလုပ်ကြရာမှာ ပုဏ္ဏားကြီးကို သူ့လက်ထဲက ပတ္တမြားလုံးပြပြီး လက်ဆောင်ပေး ပါရစေလို့ ပြောတယ်။ ပုဏ္ဏားကြီးက လက်ဝါးဖြန့်ပြီး လှမ်းယူတဲ့အခါ အပေါ်က မြှောက်ချလိုက် တော့ ပတ္တမြားက အောက်ကျသွားတယ်။ အဲဒီအခါ ပုဏ္ဏားကြီးက ပတ္တမြားလုံးကို ကုန်းကောက်ရှာတယ်။ ဒီတော့ ပုဏ္ဏားကြီး လည်ဂုတ်ကိုင် မြေကြီးနှင့် နဖူးထိအောင် နှိပ်ချပြီး၊ ပုဏ္ဏားကြီး ကျုပ်က သားမြေးအရွယ်ပါ၊ ရှိမခိုးပါနှင့်လို့ သူ့ပါးစပ်က သူ့တိုင်းသူပြည်သားများ အကျိုးအတွက် လိမ်လည် အော်ဟစ်ပြောလိုက်တယ်။ သူအော်ဟစ်ပြောသံ ကြားတဲ့အခါ ကြိုတင်စည်းဝါးရိုက်ထားတဲ့ သူ့လူ ဖွားဘက်တော်များက "ပုဏ္ဏားကြီးက တို့အရှင်ကို ရှိခိုးနေပြီ ဟေ့" လို့ ၀ိုင်းအော်ကြတယ်။ မဟောသဓရဲ့ လူများအော်သံကြားတော့ ကေးဝဋ်ပုဏ္ဏားကြီးကို ခြံရံလိုက်လာကြတဲ့ စူဠနီဗြဟ္မာဒတ်မင်းရဲ့ ဗိုလ်ပါရဲမက် သိန်းသန်းချီပြီး ပါဝင်တဲ့ စစ်တပ်ကြီးဟာ ထိတ်လန့်ပြန်ပြေးကြရှာတယ်ဆို မဟုတ်လား။
မင်းအစိုးရဆိုတာ မိမိတို့ တိုင်းသူပြည်သားတို့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက် လိမ်တန်လိမ်၊ သတ်တန်သတ်ကြ ရတာကဘဲ။ ငရဲကြီးမှာ အကုသိုလ်ဖြစ်မှာ ကြောက်ရင် မင်းအစိုးရ လုပ်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ တေမိဇာတ်တော်မှာ တေမိမင်းသားကလေးဟာ အရင်ဘ၀က ငရဲကျခဲ့ဘူးတာမြင်ပြီး၊ ရှင်ဘုရင်လုပ်ရရင် ငရဲကျချည်သေးရဲ့လို့ ကြောက်နေတဲ့အတွက် ရှင်ဘုရင်မလုပ်ရအောင် စကားမပြောဘဲ အ အ, ယောင်ဆောင်နေတာလို့ ဖော်ပြထားတယ်။
တို့တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေး စသည်များကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဖို့ တော်တော်အရေးကြီးနေသေးတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာပြီးတယ်ဆိုသော်လဲ ရေရေရာရာဖြစ်အောင် ခိုင်မြဲအောင် လုပ်ဖို့ လိုသေးတယ်။ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု ပြန်ရအောင် လုပ်ဖို့လဲ လိုတယ်။ အင်္ဂလိပ် အမေရိကန်ဆိုတဲ့ နယ်ချဲ့သမားများရဲ့ ဘေးရန်ကိုလဲ သတိနှင့် စောင့်ကြည့်ကာကွယ်ဖို့ လိုသေးတယ်။ ဒီလို အချိန်အခါမျိုးမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်တဲ့ ပုတီးစိတ်၊ ဥပုသ်စောင့်တာကိုချည့် ဦးစားပေးလုပ်နေချင်ရင်တော့ အဲဒီလို ၀န်ကြီးတွေကို အနောက်ဖက်လွန် မင်းတရားကြီး လုပ်သလိုသာ လုပ်လိုက်ကြဖို့ ကောင်းပါတယ်ဟု ပြောကြားပါသည်။
တစုံတယောက်က အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားကြီးက ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ဖူးသလဲ အမိန့်ရှိပါအုန်း ဆရာကြီးရဲ့လို့ မေးလိုက်သဖြင့် ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းသည် အနည်းငယ်ဆိုင်ငံ့ပြီးမှ အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်မိန့်ကြားပါသည်။
အနောက်ဖက်လွန် မင်းတရားဆိုတာက အင်းဝ ညောင်ရမ်းမင်းတရားကြီးရဲ့ သားတော် ကြီး မဟာဓမ္မရာဇာဘွဲ့ခံ ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ အောက်ပြည် ဒဂုံ၊ သံလျင်၊ မုတ္တမကစ တနင်္သာရီ ဇင်းမယ်ထိအောင် ပုန်ကန် ခြားနားသူများကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီး ဟံသာဝတီ ပဲခူးမြို့မှာ ခေတ္တ စံနေတယ်။ အဲဒီအချိန် ဗေဒင်အလိုအရ ချောင်းအနောက်ဖက်မှာ ယာယီစံနန်း ဆောက်ပြီး နေထိုင်တုန်း သားတော်မင်းရဲဒိဗ္ဗ လုပ်ကြံလို့ ကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကို အကြောင်းပြုပြီး အနောက်ဖက်လွန် မင်းတရားရယ်လို့ ခေါ်တွင်တာပါဘဲ။
အဲဒီ အနောက်ဖက်လွန် မင်းတရားလက်ထက်မှာ အောက်ပိုင်းဒေသများဖြစ်တဲ့ ဒဂုံ၊ သံလျင်၊ မုတ္တမ စတဲ့နယ်များက ပုန်ကန်ခြားနားမှုတွေဟာ ပိုမိုကြီးမားလာတယ်။ အထူးသဖြင့် သံလျင်စား ကုလားငဇင်ကာတို့ တသိုက်က အဆိုးဆုံးပေါ့။ အင်အားစုပြီး အင်းဝအထိ တက်တိုက်ဖို့ ကြံစည်လာကြတယ်။ ဒါကြောင့် တူတော် မင်းသားတပါးကို ရဲမက်ဗိုလ်ပါများနှင့် အခြေအနေ စုံစမ်းရန် စေလွှတ်လိုက်တယ်။
ဘုရင့် တူတော်မင်းသားလဲ စစ်လှေကြီးတစင်းနဲ့ စုံဆင်းလာလို့ မင်းဘူးရောက်တဲ့အခါ ရွှေစက်တော်ဘုရားကို ဖူးမျှော်ချင်စိတ် ပေါက်လာတဲ့အတွက် လှေမှာ အစောင့်လောက်သာ ထားခဲ့ပြီး ရဲမက်ဗိုလ်ပါများနဲ့အတူ ဘုရားသွားဖူးတယ်။ ရွှေစက်တော်ဘုရားရောက်တဲ့အခါ စေတနာသဒ္ဓါပိုလာပြီး ၀ါတွင်းသုံးလ ဥပုသ်ရက်ရှည်စောင့်ပြန်တယ်။ ဥပုသ်ထွက်တော့မှ အခြေအနေ စုံစမ်းတဲ့အခါ ဒဂုံ သံလျင်ဖက်ဆီ ပုန်ကန်ခြားနားသူတို့ရဲ့ အင်အားဟာ ပိုမိုကြီးမား နေတဲ့အကြောင်း သိရတဲ့အတွက် အောက်ဖက်ကို ဆက်မသွားတော့ဘဲ အင်းဝကို ပြန်လာခဲ့ သတဲ့။
အင်းဝရောက်တော့ ရှင်ဘုရင်ကြီးက "ဘဲ့နဲ့လဲ တူတော်မောင် ကြာလှချည့်ကလား" လို့ မေးတဲ့အခါ "မှန်လှပါ တူတော်မောင် နိုင်ငံတော်အောက်ပိုင်းက ပုန်ကန်ခြားနားသူတို့ရဲ့ အခြေအနေကို စုံစမ်းရန်အသွား၊ မင်းဘူးရောက်တော့ ရွှေစက်တော်ဘုရား ၀င်ဖူးမျှော်လိုတဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြလာလို့ ခေတ္တ ၀င်ဖူးပါတယ်။ ဘုရားရောက်တော့ စေတနာ ပိုမိုလာပြန်တဲ့အတွက် ၀ါတွင်းသုံးလ ဥပုသ်ရက်ရှည်စောင့်ပါတယ်။ ဥပုသ်ထွက်ပြီး မင်းဘူး ပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါ ဒဂုံ၊ သံလျင်က ပုန်ကန်ခြားနားသူတို့ရဲ့ အင်အားဟာ ပိုမိုကြီးမားနေကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ်" လို့ ဖြေကြားတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် တူတော်မောင် "မင်းဘူးက အောက်ဖက်ကို မရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့" လို့ ဘုရင်ကြီးက ထပ်မေးတော့ "မှန်လှပါ တူတော်မောင် မင်းဘူးအောက် မရောက်ခဲ့ပါဘူး" လို့ မင်းသားက ထပ်မံဖြေကြားတယ်။
အဲဒီတော့မှ ဘုရင်ကြီးက "တို့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ဘိုးတော် ဘေးတော်တို့ လက်ထက် က တစုတပေါင်းထဲ ရှိခဲ့တယ်၊ နိုင်ငံတော်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးများ အားလုံးဟာ လဲ ဧကရာဇ်မင်းတပါးထဲရဲ့ ထီးရိပ်အောက်မှာ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ခိုလှုံနေကြတယ်။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာရေးတွေဟာလဲ စည်ပင်ခန့်ညားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပါတ်ဝန်းကျင် တိုင်းကြီးပြည်ကြီးများရှိ အမင်းမင်းတို့က လေးစားကြတယ်။ မကျူးကျော် မစော်ကားရဲကြဘူး၊ အကြည်တော် မဟာမိတ်များအဖြစ် လက်ဆောင်ပဏ္ဏာလဲလှယ် ပို့ဆက်ခြင်း ပြုခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ကာလအနည်းငယ်ကစပြီး တိုင်းတပါးသား ကုလားဖြူ၊ ကုလားမဲများ ၀င်ရောက်လာကြပြီး သူတို့အကျိုးအတွက် တို့နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ တို့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများကို အချင်းချင်း မညီညွတ်အောင် ကွဲပြားကုန်အောင် အမျိုးမျိုး ခြေထိုး သွေးခွဲကြတယ်၊ လက်နက်ပစ္စည်းများ ပေးပြီး အားပေးအားမြှောက် လုပ်ကြတယ်။
တိုင်းတပါးသားတို့ သွေးထိုးမြှောက်ပင့်ပေးတဲ့ အတွက်နဲ့ အချို့တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဆန္ဒကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပုန်ကန်ခြားနားမှုတွေကို ခမည်းတော်လက်ထက် ကလည်း နှိမ်နင်းပေါင်းစည်းခဲ့တယ်၊ ခမည်းတော်ဟာ သူ နတ်ရွာစံခါနီးမှာ ကျန်ဒေသတွေကို ဆက်လက်ပေါင်းစည်းဘို့ မှာကြားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဦးကြီးတော် အနေနှင့်လဲ နိုင်ငံတော်ကို တပေါင်းတစည်းတည်း ဖြစ်အောင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရအုန်းမယ်၊ သံလျင်စား ကုလားငဇင်ကာတို့ကဆိုရင် ကျောင်းကန်ဘုရားတွေဖျက်၊ ကြေးဆင်းတု၊ ကြေးစည်၊ ကြေးခေါင်းလောင်းတွေ အရည်ဖျော် လက်နက်လုပ်လိုလုပ်ပြီး၊ ဘာသာ သာသနာကို ဖျက်ဆီးစော်ကား လာရုံမကဘူး အင်အားစုပြီ နေပြည်တော် အင်းဝကိုတောင် လုပ်ကြံဘို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ကြားတယ်။
အခုလို တိုင်းနိုင်ငံတော်အရေး၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာတော်အရေးများက ဆောင်ရွက်စရာတွေ အလွန် အရေးကြီးနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျုပ်တူတော်မောင်အနေနဲ့ ဘုရားတရား အာရုံပြုကာ ဥပုသ်သီလ စောင့်သုံးနေဘို့ကို ဆန္ဒပြင်းပြနေတော့ တိုင်းနိုင်ငံအရေးတွေ ဆောင်ရွက်ရမယ့် မြို့ပြထီးနန်းနဲ့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဥပုသ်သီလ စောင့်သုံးနေနိုင်မယ့် ကျောင်းကန်ဘုရားအနီးမှာ သွားနေဘို့သာ သင့်တော်တယ်။ ကိုင်း.... ဒါကြောင့် ကျွန်ပ်တူတော် မင်းသားနှင့် သူ့လူ နောက်ပါများပါ ဘုရားကို ခေါင်းလောင်းထိုးလှူလိုက်ကြ" လို့ မိန့်ကြားပြီး အတွင်းဆောင် ၀င်သွားသတဲ့။ အဲဒီအခါ မှူးကြီးမတ်ကြီးများက မင်းတရားကြီး အမိန့်အတိုင်း မင်းသားနှင့် သူ့လူများကိုပါ နန်းတော်တွင်းက ခေါင်းလောင်းထိုးပြီး ဘုရားကို လှူကြရတော့တယ်။
"မောင်တို့ တခုစဉ်းစားကြည့်၊ စစ်တခု ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အိုးအိမ်မြို့ရွာတွေသာ ပျက်စီးတာ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေလဲ အသက်ခန္ဓာဆုံးရှုံးခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ပျက်စီးခြင်းတို့လဲ ဖြစ်ကြစမြဲပဲ။ ဒါကြောင့် အခုလို စစ်ကြီးတခုပြီးကာစလဲဖြစ်၊ နှစ်တရာကျော် တိုင်းတပါးသား လက်အောက် ကျွန်သပေါက်ဘ၀ ကျရောက်ရာက လွတ်လပ်စ, လဲဖြစ်တဲ့ တို့နိုင်ငံမှာ အိုးအိမ်မြို့ရွာ အပျက်တွေကို ပြန်ပြင်ဘို့ အသစ်တည်ဆောက်ဘို့သာမက လူတွေရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါချို့ငဲ့မှုတွေ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားမှုတွေကိုလဲ ပြုပြင်ဘို့လိုတယ်။ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်လည်း အများအပြား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်စရာ လိုနေသေးတယ်။ အဲဒီလို အစိုးရရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ များပြားနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ပုတီးစိတ် ဥပုသ်စောင့် နေချင်လှတဲ့ ၀န်ကြီးတွေကိုတော့ အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားကြီး လုပ်သလို ဘုရားကို ခေါင်းလောင်းထိုးလှူလိုက်ကြဘို့သာ ကောင်းပါတော့တယ်" ဟု မိန့်ကြားကာ ရယ်မောနေပါ တော့သည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ ရယ်မောကြရပါသည်။
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 4:09:00 PM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဧရာ-မြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးများ ဟူသည်
(က)။ ဧရာ မြန်မာ ယူနီကုဒ် ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ပြောပြပါလား ?
နိုင်ငံတကာမှာ ယူနီကုဒ် လှုပ်ရှားမှုတွေ ၁၉၈၇ ခုနှစ် ကတည်းက စတင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ ပထမဆုံး Unicode Standard 1.0 ကို ယူနီကုဒ်အဖွဲ့ (Unicode consortium) ကနေ ၁၉၉၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကမ္ဘာသုံး အက္ခရာဇယား (Universal Character Set) ကို ဆက်လက် ပြုစုကြရာမှာ မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသား အက္ခရာတွေကို စနစ်တကျ ဇယားချနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီဇယားအတိုင်း ရာနှုန်းပြည့် အတိအကျ လိုက်နာတဲ့ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေ ပေါ်ပေါက် မလာတဲ့အတွက် အက္ခရာ စံလွဲတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာ - ကွန်ပြူတာနဲ့ စာစီရာမှာ ဖြစ်စေ၊ ဖောင့် (Font) ပြောင်းရာမှာ ဖြစ်စေ စာလုံးအရွယ်နဲ့ အထားအသို လွဲမှားတာမျိုးတွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတင်မက အင်တာနက်မှာ မြန်မာလို ရေးကြဖတ်ကြတဲ့ အခါ ဖောင့်စနစ်တွေ မညီညွတ်တဲ့ အတွက် စာလုံးတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် မမြင်ရတာမျိုး၊ database ထဲမှာ မြန်မာလို သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စံနစ်တကျ ပြန်လည် ရှာဖွေရာမှာ အခက်အခဲ တွေ့တာမျိုးတွေ ကိုလည်း ကြုံခဲ့ရကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ကွန်ပြူတာ သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ မြန်မာစာ ရေးထုံးမှာရှိတဲ့ ပင့်၊ ယစ်၊ ဆွဲ၊ ထိုး ဆိုတဲ့ အဖြည့်အက္ခရာ အတို၊ အရှည်တွေကို ရိုက်နှိပ်ရာမှာ မြောက်များစွာသော အပို ခလုပ်တွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ မှတ်သားရှာဖွေ ရိုက်နှိပ်ခဲ့ကြ ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒီလို အခက်အခဲ တွေကို ပြေလည်သွားအောင် ကြိုးပမ်းတဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာယူနီကုဒ် ဆွေးနွေးပွဲ တခုကို နောင်တချိန် ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ်အဖွဲ့ ဖြစ်လာမယ့် အဖွဲ့က ကမကထ ပြုပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဇင်းမယ် တက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက ယူနီကုဒ် ပညာရှင်တွေ၊ ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေ၊ ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်တွေနဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါတွေ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ မတက်ရောက်နိုင်တဲ့ ပညာရှင် တချို့ကတော့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ပေးပို့ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲ ပြီးတဲ့နောက်မှာ လည်းပဲ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်တွေနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လက်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရလာတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အပေါ် အခြေခံပြီး ဧရာယူနီကုဒ် အဖွဲ့က အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းခဲ့တာကြောင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ်ရဲ့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းကို လှမ်းနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ခ) ။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် က လက်ရှိ မြန်မာ ယူနီကုဒ် ဖောင့်တွေ အကြားမှာ ဘယ်လို ထူးခြားမှုတွေ ရှိပါသလဲ ?
ယေဘုယျ သဘော ပြောရရင်တော့ ယူနီကုဒ်ဖောင့် တခုနဲ့ တခုကြားမှာ သိပ်ကြီးမားတဲ့ ထူးခြားမှုတွေ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ်ကို နောက်ဆုံးထွက် Unicode Standard 5.2 နဲ့ အခြေခံပြီး ရေးထားတာရယ်၊ Windows PC တွေက Microsoft Office တို့ Adobe တို့လို အရေးကြီးတဲ့ application တွေမှာ အမှားအယွင်း မရှိပဲ သုံးနိုင်တာတွေ၊ ပါဠိ ပါဌ်ဆင့်တွေ အပြင် အခြား တိုင်းရင်းသား စာပေတွေပါ ပါရှိလာတာ ကတော့ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ်ရဲ့ ထူးခြားမှုတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေ ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ Microsoft Windows ရဲ့ Internet browser တွေဖြစ်ကြတဲ့ Firefox, Opera, Google Chrome, Safari စတာတွေမှာ ဖောင့်ကို မြုပ်ထားလို့ ရတဲ့ font embedding နည်းစံနစ်တွေ ပူးတွဲ ထွက်ရှိနေခဲ့တာ ဟာလည်း ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးများကို သုံးစွဲရာမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေ လွယ်ကူ စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီထက် ပိုပြီး ထူးခြားတာ ကတော့ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို ငွေကြေး အမြတ်အစွန်း အတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီ ခဲ့တာ မဟုတ်ပဲ အများသုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လွတ်လပ်သော နည်းပညာရင်းမြစ် Open Source အနေနဲ့ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချီခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာ ကတော့ မူပိုင်ခွင့်ကို ဧရာယူနီကုဒ် အဖွဲ့က ပိုင်ဆိုင်ပေမယ့် ထူးခြားတာက ဧရာယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ်အဖွဲ့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဘယ်သူမဆို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထပ်ဆင့်ပြုပြင် ဖန်တီးခွင့် ပေးထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဂ) ။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ်က ပါဠိ ပါဌ်ဆင့်တွေ အတွက် လုပ်ဆောင် ထားတာလေးတွေကို ရှင်းပြပေးပါလား ?
ပါဠိ ပါဌ်ဆင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လည်းပဲ ပါဠိဘာသာကို နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရဟန်းတော်တွေ၊ ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို ရေးဆွဲခဲ့တာမို့ အသုံးအနည်းဆုံး ပါဠိ အက္ခရာတွေ ကိုပါ အခက်အခဲ မရှိ သုံးစွဲနိုင်မှာပါ။ နောက်ပြီး ပါဠိ အက္ခရာတွေကို နေရာ ချစဉ်က (ဧရာမြန်မာ အက္ခရာတွေကို နေရာချစဉ်က အတိုင်း) ကမ္ဘာသုံး အက္ခရာ ဇယားနဲ့အညီ အတိအကျ နေရာချထား တာကြောင့် စံလွဲတဲ့ ပြဿနာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ အကယ်၍ သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ လက်တွေ့ သုံးစွဲကြည့်လို့ အခက်အခဲ တစုံတရာ တွေ့လာခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ကနေ ကူညီဖြေရှင်း ပေးသွား နိုင်မှာပါ။
(ဃ) ။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် သုံးစွဲသူတွေ အတွက် Font converter လုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြပါလား ?
ဇော်ဂျီ၊ မြန်မာ ၁၊ ယူနီကုဒ် ၅.၁ စာလုံးများ၊ ဝင်းဗားမိစ်၊ ဝင်းအင်းဝ၊ ဘီအိုင်တီ (BIT) ဖောင့်တွေကို အခက်အခဲ မရှိ အပြည့်အဝ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ Ayar Text Tools ခေါ် font converter တမျိုးးကို ဧရာ ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ တင်ပေးဖို့ ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ Myanmar Text Tool ဆိုတာကို တင်ထား ပေးပါတယ်။ Ayar Text Tools ခေါ် font converter ထဲမှာဆိုရင် ဒေတာဘေ့စ်တွေ အပြင်၊ အက္ခရာစဉ်ခြင်း၊ ဝဏ္ဏဖြတ်ခြင်းများ အတွက်ပါ သုံးစွဲတဲ့ ပရိုဂရမ်တခုကို ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အတွက် အခမဲ့ ဝေငှ ပေးထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ရေးသားထားတဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာလိပ်စာ (link) အတိအကျ ကတော့ http://www.ayarunicodegroup.org/faq/myanmar-text-tools-convertor/#more-212 ဖြစ်ပါတယ်။
(င) ။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ်မှာ တိုင်းရင်းသား စာပေတွေ အတွက်လဲ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား စာပေတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက် တွေကို ပြောပြပေးပါလား ?
မြန်မာ တိုင်းရင်းသား စာလုံးတွေကိုလည်း Unicode Standard 5.2 ကို အခြေခံပြီး ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့က ဖန်တီး နေပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ ကရင် စာပေအတွက် (စကော ကရင်၊ အရှေ့ ပိုးကရင်၊ အနောက် ပိုးကရင်စာ) တွေ အတွက် ဖန်တီး ပေးထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ တိုင်းရင်းသား ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေဟာ စမ်းသပ်တဲ့ အဆင့်တခုကို ရောက်နေပြီမို့ မကြာခင်မှာပဲ ဧရာဝဘ်ဆိုဒ်က တဆင့် သုံးစွဲသူတွေ လက်ထဲကို ဖြန့်ချီပေးနိုင် တော့မှာပါ။ တိုင်းရင်းသား စာပေ အတွက်ကိုလည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် သေသေချာချာ သုတေသနပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာ စာပေနယ်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်တွေ နဲ့ တိုင်ပင်လေ့လာ လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား စာပေတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာလုံးပြောင်း ပရိုဂရမ် font converter တွေကိုလည်း လိုအပ်ချက်တွေ အပေါ် အခြေခံပြီး၊ ကြိုးပမ်း ပေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။
(စ) ။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် ကို ဘယ်သူတွေကို အတွက် မျှော်မှန်း ထားခဲ့ပါသလဲ။ လက်ရှိမှာရော ဘယ်သူတွေ စတင် သုံးစွဲနေပြီလို့ ပြောလို့ ရပါသလဲ ? ၊ ဘယ်သူတွေ အတွက် အသုံးကျမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါလဲ ?
ဧရာ ဝဘ်ဆိုဒ်က တဆင့် ဖောင့်တွေ၊ Keyboard တွေနဲ့ လက်ကွက်တွေကို download လုပ်ကြတဲ့ လူအရေအတွက် စာရင်းကို http://code.google.com/p/ayarunicode/downloads/list?q=label:im နဲ့ http://code.google.com/p/ayarunicode/downloads/list?q=label:ttf မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဒါဟာ download လုပ်ကြတဲ့ အရေအတွက် စာရင်းသာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေက ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သုံးစွဲမယ် ဆိုတာကိုတော့ မှတ်တမ်း တင်ထားနိုင်တာ မရှိလို့ အတိအကျ ပြောနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေဟာ ပုံမှန် ကွန်ပြူတာ စာရိုက်ရာမှာ ဖြစ်စေ၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း အတွက် သုံးစွဲရာမှာ ဖြစ်စေ၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဖြစ်စေ၊ အမှားအယွင်း မရှိပဲ အလွယ်တကူ သုံးစွဲနိုင်တာကြောင့် ကျောင်းသားတွေနဲ့ ရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေ၊ ကွန်ပြူတာ စာစီစာရိုက် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့ ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်း ပညာရှင်တွေ အပြင် အင်တာနက် သုံးစွဲကြသူ တွေပါ တစထက် တစ တိုးမြှင့် သုံးစွဲလာကြလိမ့်မယ်လို့ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့က ခန့်မှန်းပါတယ်။ ဒါကလည်း မြန်မာစာနဲ့ တိုင်းရင်းသား စာလုံးတွေကို ရေးသား သုံးစွဲကြသူတွေ အားလုံးနဲ့ အကျုံးဝင်တာမို့ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို သူတို့ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ် ဖန်တီးထားတာလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
(ဆ) ။ Microsoft မဟုတ်ဘဲ Mac ခေါ် မက်ကင်တော့ရှ် တို့ လင်းနတ်တို့ မှာရောသုံးလို့ ရပါသလား ?
Mac မှာ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို အသုံးပြုတဲ့ အခါ Adobe အုပ်စုဝင် application တွေဖြစ်ကြတဲ့ Photoshop, InDesign နဲ့ Illustrator တို့ကလွဲလို့ တခြား application တွေမှာ ligature ပြဿနာတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mac မှာသုံးတဲ့ Internet browser တွေမှာလည်း ligature ပြဿနာတွေ ရှိနေ ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Mac Internet browser တွေမှာ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို သုံးမယ်ဆိုရင် Safari သုံးတာက Firefox သုံးတာထက် ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ Mac application တွေနဲ့ browser တွေ အားလုံးမှာ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ်စာလုံးတွေကို အခုထက် ပိုပြီး အဆင်ပြေပြေ သုံးနိုင်အောင် ဧရာယူနီ ကုဒ် အဖွဲ့က ဆက်လက် ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။
(ဇ) ။ Unicode Standard 5.2 က ဘာလို့များ Unicode Standard 5.1 နဲ့ မတူဘဲေ-- နဲ့ြ-- က ရှေ့ရောက်သွားတာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြ ပေးပါလား ?
သဝေထိုးနဲ့ ယရစ်ကို ကမ္ဘာသုံး အက္ခရာဇယား (Universal Character Set) အတွင်း နေရာချတဲ့ ကိစ္စမှာ Unicode 5.2 နဲ့ Unicode 5.1 က ကွာခြားမှု မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ သဝေထိုးနဲ့ ယရစ် ကိစ္စဟာ Unicode Standard version ကွာခြားမှုနဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲ encoding system ကိစ္စနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ (Unicode Consortium) က လောလောဆယ် အတည်ပြုထားတဲ့ မြန်မာစာ ရေးထုံး ဖွဲ့စည်းမှု စံနစ် (Myanmar Character Encoding System) ထဲက သဝေထိုးနဲ့ ယရစ် တွဲဖက် ရေးထုံးကို application အများစုက အသိအမှတ် မပြုကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် သဝေထိုးနဲ့ ယရစ် နေရာလွဲတဲ့ ပြဿနာဟာ မြန်မာယူနီကုဒ် စာလုံး စံနစ်တိုင်းမှာ ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ encoding ပြဿနာကို application တွေက ဖြေရှင်း မပေးသရွေ့ သဝေထိုးနဲ့ ယရစ် ပြဿနာ ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို မြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံး ဖန်တီးသူတွေက ဖြေရှင်းပေးလို့ မရတဲ့ အပြင်၊ ဒီပြဿနာ ပြေလည်သွားတဲ့ အထိ မြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် ထပ်မရေးပဲ ထိုင်စောင့်နေဖို့ ဆိုတာလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပြဿနာကို ချွင်းချက်တခု အဖြစ် လက်ခံပြီး ဧရာယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလို encoding ပြဿနာမျိုးကို အရှေ့တိုင်းက စာရေးထုံး စံနစ် အများစု - ဥပမာ အိန္ဒိယပြည်သုံး ဒေဝနာဂရီ (Devanagari) နဲ့ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား စာရေးနည်း စံနစ်တွေမှာ ကြုံနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ Unicode Consortium က လောလောဆယ် အတည်ပြုထားတဲ့ မြန်မာစာ ရေးထုံး စံနစ်ထဲက သဝေထိုးနဲ့ ယရစ် တွဲဖက် ရေးထုံးကို ပြင်ဆင်ပေဖို့ မြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့တွေက တညီတညွတ်တည်း တောင်းဆိုနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီပြဿနာကို ရှောင်လွှဲကောင်း ရှောင်လွှဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲပြောပြော မြန်မာ လက်နှိပ်စက် စံနစ်ကို အခြေခံတဲ့ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် ရေးထုံးဟာ သဝေထိုးနဲ့ ယရစ် တွဲဖက်ရေးထုံး ကလွဲလို့ ယူနီကုဒ်အဖွဲ့ (Unicode Consortium) က အတည်ပြု ထားတဲ့ မြန်မာစာ ရေးထုံးမူနဲ့ တထပ်တည်း ကျတဲ့အတွက် သိပ်ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
(ဈ) ။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံး ရဲ့ Normalization အကြောင်း၊ rendering အကြောင်းလည်း ရှင်းပြပေးပါဦး ?
Normalization ဆိုတာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံ၊ ရေးထုံးအတိုင်း ဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ Normalization ဆိုတာထက် Text Normalization ဆိုရင် ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။ စာရေးသားသူ တွေက အမျိုးမျိုး ရေးသားထားတဲ့ ပုံစံကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံအတိုင်း ပြန်လည်း ပြောင်းယူတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ အနေနဲ့ ကိုကိုရေ ကို ရိုက်မယ်ဆိုပါတော့ ... (တချို့က ကကြီးပြီး၊ လုံးကြီးတင် တချောင်ငင် က--ိ-ု က--ိ-ုရေ လို့ ရိုက်ကြမယ်။ တချို့က ကကြီးပြီး၊ တချောင်ငင်၊ လုံးကြီးတင် က--ု-ိ က--ု-ိ ရေ လို့ ရိုက်ကြမယ်။) အဲဒါတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံတခု အနေနဲ့ ပြန်လည် ပြုစုတာကို ပြောတာပါ။ ဆိုလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အသံတူ၊ အကြောင်းတူ အက္ခရာတွေကို လိုအပ်တာထက် ပိုနေရင် ဖြုတ်ပစ်တာမျိုးကို ပြောတာပါ။ ဥပမာ တချောင်းငင် အတိုနဲ့ အရှည်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်ရော အသုံးအနှုန်းပါ တူတာကြောင့် Unicode ဇယားမှာ တလုံးတည်းသာ နေရာ ပေးထားတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ အလားတူပဲ ဝိုက်ချနဲ့ မောက်ချ တွေကိုလည်း တလုံးတည်း ထားနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသား ဘာသာ စကားတခုဖြစ်တဲ့ ပိုးကရင်ရဲ့ ရေးထုံးမှာ မောက်ချကို မဖြစ်မနေ သုံးရမယ့် အနေအထားမျိုးကြောင့် ဝိုက်ချရော၊ မောက်ချကိုပါ Unicode ဇယားမှာ ထည့်ထားရတဲ့ အနေအထားမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေဟာ ယရစ် (ြ ) တခုကလွဲရင် မြန်မာစာရေးထုံး အတိုင်းပဲ အခြေခံ ထားပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Normalization ဆိုတာကို ကိုတခြား ပရိုဂရမ် တခုအတွင်းမှာ သွားရောက် လုပ်ဆောင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Normalization ကို အတိုင်းအတာ တခုအထိ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ software ကိုလည်း ဧရာ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ မည်သူမဆို အခမဲ့ ရယူနိုင်အောင်လည်း စီစဉ်နေပါတယ်။ Rendering ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မြန်မာလို ဆီလျော်မယ့် စကားလုံးက ပုံဖော်ခြင်းပါ။ ပရိုဂရမ် အများစုမှာ တိုက်ရိုက်ပုံ ဖော်ပြီးသား မရှိတဲ့ ကိစ္စလိုမျိုး၊ ဥပမာ 3D လိုဟာမျိုးမှာ indirect setup လုပ်ပြီး အချောသတ် ကြည့်လိုတဲ့အခါ rendering လုပ်တဲ့ သဘောပါ။ Rendering မှာ မြန်မာစာ ရေးထုံးအရ အသံတူ၊ အကြောင်းတူ ဖြစ်ပေမယ့် အမြင်အားဖြင့် မတူတဲ့ နေရာတွေမှာ စာလုံးတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်တွေကို အလျဉ်းသင့်သလို ပြောင်းပေးတာမျိုးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါ တချောင်းငင် အတိုအရှည် ဥပမာကိုပဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင် တချို့နေရာမှာ တချောင်းငင်ကို အတိုအနေနဲ့ အသုံးပြုပြီး၊ တချို့နေရာတွေမှာ အရှည်ကို အသုံးပြုရတာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေဟာ ကမ္ဘာသုံး အက္ခရာဇယား (Universal Character Set) အတွင်း နေရာချတဲ့ အတိုင်း လိုက်နာထားပြီး open type rander ကို အခြေခံပြီးတော့ ဖန်တီးထားခဲ့တာလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
သဏဌာန် လို့ ရိုက်ရင် သဏ္ဌာန်
စဏဍာ လို့ ရိုက်ရင် စဏ္ဍာလ
မဟာသမုဒ္ဒပိဌေ လို့ ရိုက်ရင် မဟာသမုဒ္ဒပိဋ္ဌေ
စတဲ့ စကားလုံးပေါင်း များစွာကို သေချာလေ့လာ စီစစ်ပြီး၊ သုံးစွဲသူတွေ အတွက် များစွာ လွယ်ကူစေမယ့် Auto Rendering များကို ထည့်သွင်းပြုစု ဖန်တီး လုပ်ဆောင် ထားပါတယ်။
(ည) ။ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ ရှိပါသလား ?
ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးစံနစ်မှာ အားနည်းချက် တွေရော၊ အားသာချက်တွေပါ ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေ အားလုံးရဲ့ အားနည်းချက်က Apple ဖြစ်တဲ့ Mac မှာ ကောင်းကောင်း အလုပ် မလုပ်သေးခြင်း ပါပဲ။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံး စံနစ်မှာလည်း ဒီပြဿနာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် Mac Adobe application တချို့မှာ အခက်အခဲမရှိ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးထားပါတယ်။ အားသာချက် ကတော့ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးကို နောက်ဆုံးထွက် Unicode 5.2 ကို အခြေခံပြီး ဖန်တီး ထားနိုင်ခဲ့တာ ပါပဲ။ နောက်တခုက ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် သုံးစွဲသူတွေဟာ မိမိ စိတ်တိုင်းကျ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ် သုံးစွဲနိုင်တာကြောင့် သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ ပိုပြီး စိတ်တိုင်းကျ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိ ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့ မြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေ မှာ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား စာပေတွေအတွက် ထည့်သွင်း ပေးထားတာတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးမှာ အဲ့တာတွေကို ဖြည့်ဆည်း ပေးထားပါတယ်။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ လလောက်မှာ ဆိုရင် ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးစနစ် တခုတည်းနဲ့ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား စာပေတွေကို ဖတ်ရှု ရေးသားလာနိုင်မှာမို့ ဒါကိုလည်း ဧရာရဲ့ အားသာချက်တခု အဖြစ် ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။
(ဋ) ။ ဆိုလိုတာက ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတလုံး ရှိယုံနဲ့ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား စာပေတွေကိုပါ ရေးသားနိုင် ဖတ်ရှုနိုင်မယ်လို့ ပြောတာလား ?
ဟုတ်ပါတယ်။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတလုံး ရှိယုံနဲ့ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား စာပေတွေကိုပါ ရေးသားနိုင် ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာမှ ယူနီကုဒ် စာလုံးဆိုတဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ဖန်တီးမှုတခု ဖြစ်လာမှာပါ။ ယူနီကုဒ် စာလုံးများ ဆိုတာ မည်သည့် ယူနီကုဒ် စာလုံးတလုံး ရှိယုံမျှဖြင့် မည်သည့် ဘာသာစကားကို မဆို လွယ်လင့်တကူ ဖတ်ရှုရေးသား နိုင်အောင်ဆိုပြီး စံ သတ်မှတ်ချက် အဖြစ်နဲ့ ယူနီကုဒ် စံ ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့တာပါ။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေမှာ အဲ့တာတွေ အတွက် ယူနီကုဒ် ကွန်ဆိုတီယမ်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယူနီကုဒ် ၅.၂ ဆိုတဲ့ ဗားရှင်းမှာပါတဲ့ မြန်မာစာ၊ တိုင်းရင်းသား စာတွေအတိုင်း ပြင်ဆင် ပေးထားပါတယ်။ လက်တလော အနေနဲ့ တိုင်းရင်သား စာပေတွေ အားလုံး အတွက် မရေးသား နိုင်သေးမယ့် ၅၀% ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ် စာလုံးဆိုတာ လူမျိုးတမျိုး၊ စာပေ တခုအတွက် ဖန်တီးပေး နိုင်ယုံမျှနဲ့ ပြည်စုံတယ်လို့ မဆိုလို ပါဖူး။ မြန်မာ ယူနီကုဒ် ဆိုတာနဲ့ မြန်မာ ယူနီကုဒ်အတွက် ပေးထားတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဗားရှင်းအလိုက် အချက်အလက်တွေ အားလုံး ပါဝင်မှသာ ပြည်စုံတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမည့်သည့် မြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးကမျှ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား စာပေတွေအတွက် ထည့်သွင်း ပေးထားတာ၊ ရေးသား ဖတ်ရှုနိုင်အောင် စွမ်းဆောင် ပေးနေတဲ့ သူတွေ မရှိသလောက် ပါဘဲ။ အဲဒီလို လိုအပ်ချက်တွေ အားလုံးအတွက် ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ဟာ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေ အားလုံးနဲ့ သေခြာ တိုင်ပင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
(ဌ) ။ ရှေ့ဆက် အစီအစဉ်တွေ စာဖတ်သူတွေကို ပြောပြပေးပါဦးလား ?
ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ အနေနဲ့ Apple ဖြစ်တဲ့ Mac မှာပါ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို ရာနှုန်းပြည့် သုံးလာနိုင်ဖို့ရယ်၊ တိုင်းရင်းသား ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို မကြာခင် ဖန်တီး ထုတ်ဝေနိုင်ဖို့ရယ်၊ နောက်ပြီး သုံးစွဲသူတွေ တိုးပွားလာတာနဲ့ အမျှ သူတို့ အတွက် ပံပိုး ကူညီမှုတွေ၊ လိုအပ်ချက် တွေကို အခုထက်ပိုပြီး ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ဖို့ရယ်၊ ဒါတွေ အားလုံးဟာ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ရဲ့ ရှေ့ဆက် အစီအစဉ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဍ) ။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးများဟာ တခြား ယူနီကုဒ် စာလုံးများလို ဝင်းဒိုးရဲ့ စံနစ်တခုခု hack ထားပါသလား။ အဲ့ဒီ အကြောင်းလေးတွေ ပြောပါပေးပါ ?
ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးများဟာ မည်သည့် ဝင်းဒိုးစံနစ်ကို (Windows family of operating systems) မှ ပြင်ဆင်ခြင်း (Hack) ပြုလုပ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ အဲ့လို ပြင်ဆင်ခြင်း (Hack) ပြုလုပ်ခြင်းဟာ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ် မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆ မိပါတယ်။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ အနေနဲ့ အင်စတော်လာ ဖန်တီးပေးရမှာလည်း ဖောင့်နဲ့ လက်ကွက် ၂မျိုးထဲကိုသာ အလွယ်တကူ သုံးစွဲနိုင်အောင် လုပ်ဆောင် ပေးထားသာ ဖြစ်ပြီးတော့ သုံးစွဲသူ ပိုင်ရှင်များ (USER) ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ၊ မည်သည့် အချက်အလက် များကိုမှ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်း မရှိပါဘူး။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အင်စတော် (Ayar Installer) တွေရဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သိသာပါတယ်။ ၁ အမ်ဘီ(1MB)တောင် မပြည့်ပါဘူး။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ်အဖွဲ့ အနေနဲ့ တခြား ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့ သူတွေလို ပိုင်ရှင်ရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အားနည်ချက်တွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး၊ မည်သည့်အခါမှ လုပ်ဆောင်မှာ မဟုတ်သလို၊ သုံးစွဲမည့်သူတွေ အတွက် လိုအပ်မယ့် အချက်အလက် တွေကို နည်းပညာ ထောက်ကူပြု စာမျက်နှာကသာ သုံးစွဲမည့်သူတွေ အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်မယ့် အချက်အလက်တွေကို ရေးသားတင်ပြ ပေးသွားမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ သုံးစွဲနေသူ ပိုင်ရှင်များရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အားနည်ချက် တွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး၊ မိမိ ဖန်တီးထားတာမှ ကောင်းတယ် အဆင်ပြေတယ်လို့ ထင်တတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို လိုအပ်ချက်တွေ အရ စုစည်း ဖန်တီး ပေးထားခဲ့မို့လို့ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးစံနစ်ကြောင့် မည်သည့် ကွန်ပြူတာ စံနစ်ကိုမှ ထိခိုက် ဖျက်ဆီးစရာ မရှိပါဘူး။ အဲ့လောက်နဲ့ဘဲ လုံလောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့။
(ဎ) ။ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ အနေနဲ့ စာဖတ်သူတွေကို တခြား ဘာများ ပြောချင်ပါသေးလဲ? ပြောစရာ တွေများ ရှိပါသေးလား ? ပြောစရာများရှိရင် ပြောပါလား ?
ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေဟာ မတူညီတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိကြတဲ့ လူတွေ အားလုံးအတွက် ခြုံငုံ လုပ်ဆောင်ရတာ ဖြစ်လို့ လူတိုင်း အတွက် ဒေါင့်ပေါင်းစုံမှာ ရာနှုန်းပြည့် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင် သလောက်နီးပါး ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုပဲ ကောင်းသော စိန်ခေါ်မှုတခု အဖြစ် ဧရာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့က ခံယူပြီး၊ အောင်မြင်မှု မရ-ရအောင် မဖြစ်မနေ ကျော်လွှားကြဖို့ သံန္နိဋ္ဌာန် ချထားကြပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီလို အောင်မြင်မှုမျိုးကို ရနိုင်ဖို့ ဆိုတာက ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ အနေနဲ့ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို သုံးစွဲကြသူတွေ ထံကရော ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ်အဖွဲ့ ပြင်ပက ယူနီကုဒ် ပညာရှင်တွေ ထံကပါ အကြံပေး ကူညီမှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။
စောစောက ပြောခဲ့သလိုပဲ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးတွေကို ဖန်တီး တီထွင်တာဟာ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် တစုံတရာ အတွက် မဟုတ်ပဲ တိုင်းရင်းသား စာပေများ အပါအဝင် ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ စာပေလောက၊ မြန်မာ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ လောကနဲ့ (ဘလော့ဂ်ဂါများ အပါအဝင်) မြန်မာ အင်တာနက် လောကတို့ကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ဖန်တီး တီထွင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသဘောထားမျိုး ရှိသူ မည်သူမဆိုရဲ့ အားပေးကူညီမှုကို ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့က တန်ဘိုးထားပြီး ကြိုဆိုပါတယ်။
ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံးများ ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် စတင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေကို အကောင်အထည် ဖေါ်ခဲ့တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမည့် ၂၀၁၀ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာ ထပ်မံတွေ့ဆုံ စည်းဝေးကြပြီး၊ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၊ ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် စာလုံး သုံးစွဲသူတွေ အတွက် အကောင်းဆုံးသော ရလဒ်များ ပေးသွားနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ။
အခုလို ဖြေကြားခွင့် ရတဲ့အတွက် လူထုအသံ ဝိုင်းတော်သားတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဧရာမြန်မာ ယူနီကုဒ် အဖွဲ့
စီစဉ်ရေးသားသူ ဒေါင်းဇာနည် ရေးသားချိန် 11:38:00 AM0ဦးကထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။